कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily] - 25 Jul, 2021
हतारमा कानुन, कार्यान्वयनमा जटिलता
अब अनलाइन दर्तापछि मात्रै खोप
टिंकरमा बीओपी बन्दै
सडकमा देखिने ठेकेदारको शासन
सबैको चासो एमसीसीमा
शिक्षक संघको अर्घेल्याइँ
ओलीगमनपश्चात्का राजनीतिक परिदृश्य
दृष्टिकोण Page 8
लामा दूरीका सवारी चले पनि यात्रु छैनन्
पोखरा–नेपालगन्ज उडान गर्दै बुद्ध एयर
छोटी भन्सार नहुँदा व्यवसायीलाई कठिन
महेशपुर नाम मात्रको मूल भन्सार
खल्ती टपअपमा १० प्रतिशत क्यासब्याक अफर
एनएमबीका ग्राहकलाई बिगमार्टमा छुट
एचसीसी–एनको डिनमा गोल्छा
खेलकुद Page 11
नेपालको परम्परागत सुरुआत
‘सोचेभन्दा कम स्कोर’
(काठमाडौं) - प्रस्थान कक्षमा यात्रु छिर्नेबाहेक छुट्टै एउटा
फलामे ढोका छ, जुन यदाकदा मात्रै खुलेको देखिन्छ । शनिबार बिहान ९ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उक्त ढोका खोलिँदा त्यहाँ २ घण्टाअघिदेखि नै भेला भइसकेका थिए मलिन अनुहार लगाएकाहरू । यही भीडमा छुट्टै किंकर्तव्यविमूढ उभिएकी थिइन् दैलेखको दुल्लु–१३ मालिकाकी २८ वर्षीया पुष्पा शाही । साथमा थिए १३ वर्षीया छोरी र १० वर्षका छोरा ।
अलि पर भित्र पस्न हतारिँदै थिए उनका जेठाजु नरेन्द्रबहादुर र चार जना आफन्त । मलेसियाबाट उडेको नेपाल एयरलाइन्सको विमान बिहान
७ः३० बजे अवतरण भएको थियो । वाइडबडी विमान २४ जनाको शव लिएर आएको थियो । तीमध्येको एउटा शव ३२ वर्षीय लोकबहादुर शाहीको थियो, जसका लागि १८ घण्टा कठिन यात्राको दूरी पार गर्दै पुष्पा, छोराछोरी र आफन्त आएका थिए ।
शव बुझ्न कागजी प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै दुई घण्टा लाग्यो । शव बुझ्ने कागजात भएपछि प्रहरीले गेट आधा मात्रै खोलेर नरेन्द्रबहादुरको साथमा रहेका आफन्तलाई भित्र पस्न दिए ।
पुष्पा र छोराछोरी बाहिरै उभिए । विमानस्थलभित्र शव ल्याइएका सेता बाकस खात लगाइएको
थियो । भिज्न नदिन बाकसलाई प्लास्टिकले
बेरिएको थियो ।
हरेक बाकसमा नाम लेखिएको थियो । भित्र
पस्न दिएपछि नरेन्द्र आफ्ना भाइ ‘लोकबहादुर शाही’ नाम लेखिएको बाकस खोज्दै अगाडि बढे । शव बनेर भाइ आएको बाकस भेटियो । पाँच जना मिलेर स्ट्रेचरमा हाली बाहिर निकाले । भित्र नरेन्द्रले शव भएको बाकस पहिचान गर्नेबित्तिकै
बाहिर ढोकाबाट हेरिरहेकी पुष्पाको आँखाबाट आँसुको भल छुट्न थालिसकेको थियो । छोरीले
भित्र आँखा लगाइरहे पनि छोराले भने आमालाई हेरिरहे । पुष्पालाई सम्हालिन निकै गाह्रो
भइरहेको थियो । नरेन्द्रले बाकसलाई बाहिर ल्याए । परिवारका तीन जना शवको टाउको राखिएको भागमा हात राखेर रुन थाले । यो दृश्य देख्ने अरूका आँखा पनि रसाइरहेका थिए । नरेन्द्रले शव लैजान ल्याइएको गाडीमा बाकस लोड गरे । गाडी पशुपति आर्यघाट पुग्यो ।
सुरक्षा गार्डको काम गर्न भिसा आउँदा लोकबहादुर हाँसीखुसी घरबाट हिँडेका थिए । उनी २०७४ पुस २६ मा मलेसिया गएका थिए । नेपाली
दूतावासका अनुसार गत जुलाई २० मा उनले आत्महत्या गरेका थिए । ‘वास्तविक कुरा
बुझ्न सकेको छैन । सुन्नमा आएअनुसार आत्महत्या भएको भन्ने छ । विदेशको मामिलाबारे पूरा
कुरा बुझ्न सकेको छैन,’ नरेन्द्रले भने, ‘उनले आत्महत्या गर्नुपर्ने कारण त थियो जस्तो हामीलाई लाग्दैन । खै के हो ? के ?’ उनले कम्पनी र साथीहरूमार्फत भाइको मृत्युको कारण पत्ता लगाउन कोसिस पनि गरेका थिए । तर चित्तबुझ्दो उत्तर नपाएको उनले बताए । दाहसंस्कार सकेपछि उनीहरू साँझ ६ बजे दैलेख फर्किए ।
नेपाल एयरलाइन्सको उडान नम्बर ४१६ ले शाहीसहित सल्यानका बुद्धिराम कामी, बर्दियाका मनीराम चौधरी, बैतडीका कर्णबहादुर बुढाथोकी, जाजरकोटका सन्दीप विक, बागलुङका सुनिल बीसी, तनहुँका झापटबहादुर थापा, पाँचथरका दलबहादुर मोक्तान, ललितपुरका कृष्णकुमार राई, सुनसरीका होमबहादुर गुरुङ, बाराका रामचरित्र कानु, सिन्धुपाल्चोकका अमरबहादुर माझी, सिरहाका रूपेश पुलामी मगर, कपिलवस्तुका श्यामु थारू, ओखलढुंगाका सोमरबहादुर तामाङको
शव लिएर आएको हो । त्यस्तै, झापाका शम्भु
विक, मोरङकी कमलादेवी भण्डारी, झापाका लोकबन्धु लावती, नवलपरासीका मति तामाङ, पाल्पाका यमबहादुर सनारी, ओखलढुंगाका दलमान तामाङ र झापाका गोविन्द बोहराको शव पनि आइपुगेको छ ।
मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार निषेधाज्ञाको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिएकाले समयमा नै शव पठाउन नसकिएको हो ।
लामो समयसम्म सरकारले नेपाल एयरलाइन्सको विमान नपठाइदिएकाले मलेसियामा मृतक कामदारको शव रोकिएको थियो । दूतावासका अनुसार अझै १० जनाको शव पठाउन बाँकी छ । कोरोनाबाट मात्रै मृत्यु भएका ३५ जनाको शव भने स्वदेश आउन पाएन ।
मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले पछिल्लो समयमा आत्महत्या गर्ने
बढिरहेको बताए । ‘आत्महत्या गर्ने दर बढ्यो । यसले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ,’ उनले भने, ‘पारिवारिक तनावका कारण आत्महत्या गर्नेको संख्या बढिरहेको छ ।’ त्यसबाहेक औद्योगिक दुर्घटना, सडक दुर्घटना र दीर्घरोगले मर्ने पनि बढेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै २ सय ८१ जना नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ । प्रमुख
श्रम गन्तव्य मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी नेपाली कामदारको मृत्यु मलेसियामा हुने गरेको छ । पछिल्लो एक दशकमा मात्रै ३ हजार जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
राजदूत पाण्डेका अनुसार हृदयघात र रोगको सिकारबाट मृत्यु भइरहे पनि पछिल्लो समय आत्महत्याको दर चिन्ताजनक ढंगले बढेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्था मोइसको दुई वर्षअघि प्रकाशित अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार श्रम गन्तव्य मुलुकमा प्रतिकूल वातावरणमा काम गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच हुने गरेकाले कामदारको मृत्यु भइरहेको छ ।
(काठमाडौं) - कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको ११ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले संसद्मा विश्वासको मत लिइसके पनि कैयौं जटिलता देखिँदा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएको
हो । यसले सरकारको कार्यसम्पादन सुरुमै प्रभावित भएको छ ।
असार २९ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भई शपथ लिएका देउवाले साउन ३ मा प्रतिनिधिसभाबाट १ सय ६५ सांसदको समर्थनसहित विश्वासको मत लिएका
थिए । ‘सकेसम्म सरकारमा सामेल हुने सबै पार्टीलाई समेटेर एकैचोटि विस्तार गरौं
भन्ने हो,’ माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘उपेन्द्र यादवजीहरूले पार्टीको आधिकारिकताको विषय निर्वाचन आयोगबाट नटुंगिएकाले केही दिन माग्नुभएको थियो । माधवजीहरूले पनि केही निर्णय गर्नुभएको छैन । त्यसैले ढिला भएको हो ।’
यसअघि जसपा अध्यक्ष यादवले आयोगले साउन ७ (बिहीबार) सम्ममा पार्टीको विवाद
टुंग्याउने सम्भावना रहेको भन्दै त्यसअगाडि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्न प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग आग्रह गरेका थिए । आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा आयोगले पार्टी एकता हुँदाको बखत जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा रहेका ५१ जनालाई सनाखतका लागि साउन ११ गते उपस्थित
हुन निर्देशन दिएको छ । तर, जसपाका
अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले बहुमत परीक्षण गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्न माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइको अर्को कारण एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकारमा सहभागिताबारे औपचारिक निर्णय नदिनु हो । नेपालले प्रधानमन्त्री
देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष
दाहाललाई सरकारमा सहभागी हुने आश्वासन दिएका छन् । आफ्नो समूहमा परामर्श थाले पनि उनले सरकारमा सहभागी हुनेबारे औपचारिक निर्णय गराएका छैनन् । कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘उहाँहरू सरकारमा आउने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा नेपाल पक्षसहितको होस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ । उहाँहरू आउन ढिला भयो भने अन्य पक्षलाई समेटेर केही दिनमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’
नेपालनिकट एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली मुख्यतः दुई कारणले सरकारमा जान नसकिने बताउँछन् । ‘हामी आफूलाई
एमाले भनिरहेका छौं, अहिले एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष हो, हामीले मात्रै निर्णय गरेर एकथरी मान्छे सत्तामा जाने अर्कोथरी प्रतिपक्षमा
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन्न नसकेकाले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेताहरू बताउँछन् । मन्त्रीहरूबीचको काममा तालमेल मिलाउन र सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने गरिन्छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार स्वाभाविक देखिने भन्दै गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताहरू यसको तयारीमा जुटेका छन् । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा काम
गरिरहेको छ ।
(काठमाडौं) - आगामी भदौ १९ भित्र महाधिवेशन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा रहेको कांग्रेसको महाधिवेशन तालिका प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ । नेतृत्वले औपचारिक रूपमा नभने पनि दोस्रो तहका नेताहरू भदौ १६–१९ को मितिमा महाधिवेशन हुन सकेन भने के गर्ने भन्दै विकल्प खोज्नतिर लागेका छन् ।
(काठमाडौं) - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै सतर्क रहन सार्वजनिक अपिल गरिसकेको छ । विज्ञहरूले तेस्रो लहरमा बालबालिका बढी जोखिममा रहने चेतावनी दिइरहेका छन् । तर अस्पतालहरूले बालबालिकाका लागि आईसीयूलगायतको पूर्वाधार व्यवस्थापनमा तदारुकता देखाएका छैनन् ।
राजधानीकै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, ट्रमा सेन्टर र सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा कोरोना संक्रमित बालबालिका उपचार गर्न छुट्टै भेन्टिलेटर र आईसीयूको व्यवस्था छैन । कान्ति बाल अस्पतालले पनि आईसीयूलगायत उपकरण थप गर्न सकेको छैन । त्रिवि शिक्षण र पाटन अस्पतालमा संक्रमित बालबालिकालाई
छुट्याइएका सबै बेड भरिएका छन् ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बालबालिकाका लागि ६० बेडको जनरल वार्ड छ । एनआईसीयू १४ र पीआईसीयू ८ बेडमध्ये कोभिडका
लागि ४ वटा छुट्याइएको छ । अहिले सबै आईसीयू भरिएका छन् । मन्त्रालयबाट अस्पतालले आईसीयू र भेन्टिलेटर खरिद
गर्न १२ करोड प्राप्त गरिसकेको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी रामविक्रम अधिकारीले आवश्यकताअनुसार उपकरण थप गर्दै लैजाने बताए ।
(काठमाडौं) - पाँचथरको कुम्याक गाउँपालिका–५ की एक बालिकाले न्वारनअघि नै कोरोना संक्रमणका कारण आमा गुमाइन् । उनीमाथिका २, ६ र ८ वर्षका तीन दिदीसमेत आमाविहीन भए । कमजोर आर्थिक अवस्थाका बाबु चार छोरीले आमा गुमाएकामा मात्रै होइन उनीहरूको भविष्यप्रति पनि चिन्तित छन् ।
काठमाडौं (कास)– शनिबार धेरै तरकारी बिक्री हुने भएकाले रामबहादुर राईले शुक्रबार मात्र डेढ लाख रुपैयाँको आलु, प्याज गोदाममा झारेका थिए । तर मध्यरातको वर्षात्सँगै धोबी खोलामा आएको बाढीले राईको गोदाम डुबायो । उनले बिक्री गर्न ल्याएको आलु, प्याज हिलाम्य भयो । ‘झन्डै १२ घण्टा पूरै गोदाम डुब्यो, पानीले भिजेको आलु, प्याज कुहिएर कामै लाग्दैन,’ उनले भने, ‘पसलको मौज्दात तरकारी पनि हिलाम्य भयो ।’
राईको मात्र होइन्, धोबी खोलामा आएको बाढीले चाबहिल आधुनिक तरकारी तथा फलफूल होलसेल कृषि बजारको २ सय २० स्टल (पसल) जलमग्न छ । मध्यराति आएको बाढीसँगै बगेर आएको माटो जमेको छ । ठूलो परिमाणमा तरकारी बाढीले बगाएको व्यापारीहरू बताउँछन् । शनिबार दिनभर तरकारी व्यापारीहरू पसलमा जमेको पानी फ्याँक्नमा व्यस्त देखिन्थे । अधिकांशले जेनेरेटरको प्रयोग गरेर पानी फ्याँके ।
तरबारी बजारसँगैको हिमाल ग्लास हाउसमा बाढीले बगाएर ल्याएको झन्डै २ फिट माटो जमेको छ । ‘पानीले ग्लास त बिगार्दैन तर माटोले गोदाम भरिएको छ,’ ग्लास व्यापारी बद्री नेपालले भने, ‘गोदाममा जमेको माटो निकाल्न कम्तीमा पनि २ दिन लाग्ने भयो ।’ भत्केको पुलस्थित टहरामा खाजा पसल सञ्चालन गर्दै आएका सोलुखुम्बुका पासाङ दावा लामाका तीनवटै कोठा जलमग्न भए । ‘साँझको काम सकेर सुत्न मात्र लागेका थियौं, टहरामा बाढी पस्यो,’ उनले भने, ‘रातभरि सुतेको छैन । सिरक, डस्ना त राति नै फ्याँक्यौं । दराज, खाट सबै डुब्यो ।’ शनिबार दिउँसो लामाका छिमेकीहरूले कोठाको सामान निकाल्न सघाउँदै थिए । कोठाभित्र झन्डै ३ फिट पानी जमेको उनी बताउँछन् ।
देवीनगर करिडोर सडकमा बाढीले बगाएर ल्याएको माटो एक्स्काभेटरले हटाएको छ । देवी नगरका युवराज प्रसाईंका अनुसार करिडोर आसपासका घरहरूमा बाढी पसेर माटो जमेको छ । ‘भुइँतलाको रेडिमेड कपडाको गोदाम जलमग्न छ, लाखौं रुपैयाँको कपडा काम नलाग्ने भयो,’ उनले भने, ‘स्टेसनरी सामग्री, किराना पसललगायतमा क्षति पुगेको छ ।’ कपन मिलन चोक, भृकुटी चोक, तेन्जिङ चोकलगायत क्षेत्र डुबानका कारण सवारी आवागमनसमेत प्रभावित भएको थियो । सडक किनाराका अधिकांश घरहरूमा बाढी पसेको स्थानीय आयुषा तामाङले बताइन् ।
धोबी खोलामा आएको बाढीले करिडोर आसपासका बस्ती डुबानमा परेको छ । धोबी खोला करिडोर आसपासका होटल, खाजाघर, कपडा, स्टेसनरी, किराना पसलमा बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ । शुक्रबार राति परेको वर्षात्का कारण काठमाडौं महानगरपालिकाका– १०, ११, २९ र ३१ का करिडोर आसपासका बस्तीमा बाढीले क्षति पुर्‍याएको हो । प्रत्येक वर्ष धोबी खोलाको बाढीले आसपासको बस्ती डुबानमा पर्ने गरेको छ ।
करिडोरको नाममा खोलालाई खुम्च्याउँदा वर्षात्मा धान्न नसक्ने गरी बाढी आएको स्थानीय युवराज प्रसार्इंले बताए । ‘पहिले खोलाको चौडाइ १२ मिटर थियो, करिडोर बनेपछि ९ मिटरमा खुम्चिएको छ,’ उनले भने, ‘पहिले–पहिले बालुका निकालेर पनि खोलाको सतह गहिरिएको हुन्थ्यो, अहिले माटो थुप्रिएर सतह बढेपछि खोला बस्तीमा पस्न थाल्यो ।’ पुल बनाउँदा, सडक विस्तार गर्दा खोलालाई अतिक्रमण गरेपछि आसापासका क्षेत्र डुबानमा पर्दै आएको उनी बताउँछन् ।
(लिसंखु, सिन्धुपाल्चोक) - ठेकेदार कम्पनीले सडक निर्माणमा बेवास्ता गरेको भन्दै तत्काल काम थाल्न दबाबस्वरूप हिलाम्य सडकमै रोपाइँ गरिएको छ । लिसंखुपाखर गाउँपालिकाका स्थानीय र घ्याङडाँडा, सिद्धार्थ, दोबाङ, अन्दरबुङ, शिखर गरी ५ युवा क्लबका सदस्यले बिहीबार दिनभर ठेकेदारसहित स्थानीय तह र अन्य सम्बन्धित निकायलाई तत्कालै सडक मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरूले मंगलबार साँझ सडकमै रोपाइँसमेत गरेका थिए ।
लिसंखु–एक्काइसकिलो–अत्तरपुर र बुलबुले–अत्तरपुर गरी दुईवटा सडक खण्ड निर्माणको काम अहिले अलपत्र छ । बुलबुले–अत्तरपुर खण्डमा ८ मिटर चौडा, ग्राभेल गर्ने र नाला बनाउने काम ठेकेदारले गएको वैशाख १५ देखि रोकेके छ । त्यसयता ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कमै नआएको सडक डिभिजन कार्यालय, चरिकोटले जनाएको छ । यसअघि ठेकेदारको मृत्युपछि अलपत्र बनेको झन्डै ११ करोड रुपैयाँबराबरको लिसंखु–एक्काइसकिलो–अत्तरपुर सडक (४.२ किमि) को केही दिनअघिबाट काम थालिए पनि यातायात भने ठप्प रहेको स्थानीय बताउँछन् । यो खण्डमा लिसंखुपाखर गाउँपालिकाको कार्यालयसमेत छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका अनुसार यो सडक कालोपत्र गर्न प्रदेश सरकारले इलाइट रिभन रसुवा जेभीलाई जिम्मा दिएको थियो ।
‘बुलबुले–अत्तरपुर खण्डमा बर्खा लागेयता सवारीसाधन त परै जाओस्, पैदल हिँड्न पनि मुस्किल छ । हेलिकप्टर चार्टर गर्न सक्ने क्षमता छैन, एम्बुलेन्स र अन्य सवारीसाधन नचल्दा सुत्केरी र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीसमेत गाउँमै थन्किएका छन्,’ लिसंखुपाखर–४ अत्तरपुरस्थित घ्याङडाँडा युवा क्लबका अध्यक्ष गौतम लामाले भने, ‘त्यसैले सडक छिटो बनोस् भन्न दबाबस्वरूप यो सडकमा धान रोपेका हौं ।’ उनका अनुसार करिब एक किमि सडकको ठाउँठाउँ धान रोपिएको थियो । लिसंखु–एक्काइसकिलो–अत्तरपुर सडकसमेत ठप्प हुँदा गाउँपालिका कार्यालयसमेत जान नसक्ने अवस्था रहेको उनले गुनासो गरे ।
ठेकेदार कम्पनी र सम्बद्ध निकायलाई सडक सहज बनाइदिन चर्को दबाब दिइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष कमल नेपालले बताए । ‘सडक सहज बनाउन आवश्यक सबै पहलकदमी गरिरहेका छौं, सम्बद्ध निकायमा पुग्ने गरी ध्यानार्कषण गराइसकेका छौं,’ उनले भने । सडक डिभिजन प्रमुख विजयकुमार महतोले सडकको अवस्थाबारे थाहा पाएको र पूर्वाधार कार्यालय र अन्य प्रदेश सरकारसम्बद्ध पक्षसँग समस्या समाधान गर्न लागि परिरहेको दाबी गरे । ‘यसबारे स्थानीय तहबाट जानकारी पाएका छौं, ठेकेदार पक्षलाई गम्भीर बन्न सूचना पनि दिनेछौं,’ उनले भने ।
- सुवास बिडारी
(मकवानपुर) - वाग्मती प्रदेश सरकारले एक दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ । पर्याप्त अध्ययन र छलफलबिनै हतारमा कानुन बनाउँदा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएसँगै १३ वटा कानुन संशोधनको तयारी गरिएको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मदन शिवाकोटीका अनुसार प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन २०७४, कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी ऐन २०७५, प्रदेश सभाको पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ संशोधन गरिने भएको छ । यस्तै, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन २०७५, प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन २०७६, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी ऐन २०७६, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७७, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५ र प्रदेश संस्था दर्ता ऐन २०७५ संशोधनको तयारी गरिएको छ ।
‘कानुन कार्यान्वयनमा केही व्यावहारिक समस्याहरू देखिएकाले ऐनहरू संशोधन गर्नुपरेको हो । संघीय कानुनसँग केही विषय जोडिएकोले पनि ऐन संशोधन गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशले निर्माण गरेको ऐनमा दण्ड सजायमा कैदको विषयमा पनि उल्लेख गरेका छौं । सैद्धान्तिक रूपमा प्रदेशले बनाएको ऐनमा कैद सजायको व्यवस्था गर्न मिल्दैन । यसो हुँदा पनि कतिपय कानुनहरू संशोधन गर्नुपरेको हो ।’
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनमा यस्तै व्यावहारिक समस्या देखिएकाले संशोधनको तयारी भइरहेको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूको स्वास्थ्य बिमाको विषय ऐनमा लेखिए पनि अनुसूचीमा रकम उल्लेख नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेन । यो ऐनको दफा १४ को उपदफा १ मा पदाधिकारी र सदस्यलाई उपचारका निमित्त प्रदेशसभा सचिवालयले स्वास्थ्य बिमाका लागि प्रिमियमबापत अनुसूची १ बमोजिमको रकम उपलब्ध गराइनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, अनुसूची १ मा यो विषय नै उल्लेख छैन । बिमा प्रिमियमको रकम खुलाउने गरी अनुसूचीमा संशोधन हुने शिवाकोटीले बताए ।
सोही दफाको उपदफा २ को व्यवस्था अस्पष्ट भएकाले पनि संशोधन गर्न थालिएको हो । उपदफा २ मा स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था नभएमा पदाधिकारी तथा सदस्यलाई सामूहिक रूपमा प्रदेश सरकारले तोकेको एक जना चिकित्सकको सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ । ‘तर, यो चिकित्सक कसरी उपलब्ध हुन्छ भन्ने स्पष्ट भएन,’ उनले भने, ‘कोही पदाधिकारीहरू प्रदेशबाहिर गएर बिरामी हुनुभयो भने कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने नै खुलेको छैन । यसर्थ यो व्यवस्थामा स्पष्टताका लागि पनि ऐन संशोधन गर्न जरुरी रहेको हो ।’
प्रदेश तहमा निजामती सेवासम्बन्धी ऐन नबन्दा समस्या भएको छ । संघीय सरकारले निजामती कानुन नबनाउँदा प्रदेशले बनाउन नसकेको बताए । लोक सेवा आयोग ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि निजामती सेवा ऐन नबन्दा कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासमा समस्या देखिन थालेको शिवाकोटीले बताए । ‘संघीय सरकारले निजामती कानुन नबनाउँदा प्रदेशका कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न पनि समस्या देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशका कर्मचारीको सरुवा, बढुवाजस्ता वृत्तिविकासमा कानुनी बाधा पुग्ने देखिन्छ ।’ संघीय सरकारले दरबन्दी नै नभएका कर्मचारी पठाउँदा पनि समस्या भएको उनले बताए ।
एक वर्षअगाडि नै निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भए पनि संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा अड्किएको छ । ‘हामीले एक वर्षअघिदेखि नै मस्यौदा तयार गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले यससम्बन्धी कानुन नबनाइदिँदा हामीलाई पनि कानुन बनाउन समस्या भएको हो ।’ संविधानतः संघीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेशले कानुन बनाउन मिल्दैन । ‘हामीले सुरुमै कानुन बनाउँदा बाझिने सम्भावना रहन्छ । अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्छ । यस कारण पनि निजामती सेवा ऐन निर्माणमा जटिलता देखिएको हो,’ उनले थपे । वाग्मती प्रदेशमा हालसम्म जम्मा ६० वटा विधेयकहरू प्रमाणीकरण भई कानुनका रूपमा लागू भएका छन् । सरकारले अझै एकल र साझा अधिकार सूचीका करिब ३० वटाभन्दा बढी कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ ।
(चितवन) - यहाँको उत्तरी पहाडी भेगमा बस्ने चेपाङ समुदायलाई सुविधा दिन खुलेको भण्डारा–मलेखु चेपाङ मार्ग बर्खा लागेसँगै ठाउँ–ठाउँमा गएको पहिरोले अवरुद्ध छ । सडक पुरिएर तथा भासिएर सवारीसाधन चल्न नसक्दा विकट गाउँका बासिन्दाले अनेकौं सकस बेहोरिरहेका छन् । बिरामी भए उपचार गर्न भण्डारा या भरतपुर आउनुपर्छ । तर गाडी नचल्दा अस्पताल पुग्न कठिनाइ भइरहेको राप्ती नगरपालिका–१३ का अध्यक्ष सूर्यबहादुर चेपाङले बताए । ‘एक बालक अस्पताल पुर्‍याउँदा पुर्‍याउँदै बिते,’ उनले भने, ‘पहिरोले बाटो भत्केको छ । गाडी नचल्दा समयमा अस्पताल पुर्‍याउन सकिएन । समयै पुगेको भए बाँच्थे कि ।’
नगर क्षेत्रकै गाउँ भए पनि लोथर, कोराकलगायत गाउँमा सडक, बिजुली, टेलिफोनको सहज सुविधा छैन । साविकको लोथर गाविसलाई हाल राप्तीको १२ र १३ नं. वडामा समेटिएको छ । विकट यी क्षेत्रको केही भागमा हिउँदमा जेनतेन गाडी चल्छन् । तर लगातारको वर्षापछि गत असार १७ मा ठाउँ–ठाउँमा पहिरो खस्दा सडक क्षतविक्षत छन् । चेपाङ मार्गको भन्ज्याङसम्म जसोतसो जिप चलिरहेका छन् । राप्तीको केन्द्र भण्डाराबाट गाडीमा दुई घण्टामा भन्ज्याङ पुगिन्छ । भन्ज्याङभन्दा माथिल्लो भेगका बासिन्दा अहिले बिरामी भए वा अन्य कामले भण्डारा आउनुपरे कम्तीमा तीन घण्टा हिँड्नुपर्छ । राप्ती–१३ मै पर्छ गुन्दी । गुन्दीका सीताराम चेपाङको घरमा सोमबार बिहान सबै जना खुसी थिए । सीतारामका छोरा नवीन र बुहारी ज्योतिको त्यस दिन पहिलो सन्तान जन्मेको थियो । तर नवजात शिशुलाई ज्वरो आउन थाल्यो । मंगलबार बिहान उपचारका लागि भरतपुरतर्फ दौडाए । गाडी नचलेकाले बोकेरै भन्ज्याङसम्म ल्याएका थिए । तर अस्पताल पुर्‍याएपछि शिशुको मृत्यु भएको वडाध्यक्ष चेपाङले बताए । सडकका कारण बेलैमा अस्पताल पुर्‍याउन नसक्दा शिशुको मृत्यु भएको गुन्दीकै छविलाल चेपाङले दाबी गरे । ‘गुन्दीबाट ३ घण्टामा भन्ज्याङ आए । हिँडेर आउँदा यत्रो समय लागेको हो,’ छविलालले भने, ‘त्यतिबेला भन्ज्याङमा पनि गाडी थिएनन् । त्यसैले उनीहरूले दुई घण्टा जति त्यहाँ पर्खनुपरेको थियो ।’ उनका अनुसार सडक बिग्रँदा अहिले यो खण्डमा निकै कम मात्रै गाडी चल्छन् ।
उनी साथी गोपीलाल चेपाङका साथ लागेर यसबारे कुरा गर्न बिहीबार नगरपालिका पनि गए । यो सडक निर्माण र मर्मत गर्ने जिम्मा भरतपुरको डिभिजन सडक कार्यालयको हो । चेपाङ मार्गको ट्र्याक केही वर्ष पहिल्यै खुले पनि स्तरोन्नतिको काम बाँकी नै छ । लगभग ६६ किमि लम्बाइको यो सडक ५ किमिजति मात्रै कालोपत्र भएको छ । बजेट पर्याप्त नआउने गुनासो सडक कार्यालयको छ । ‘ठूलो बजेट भएको आयोजना होइन । ट्र्याक खुलेका कारण जति बजेट आउँछ, त्यसैका आधारमा कालोपत्र र स्तरोन्नतिका अन्य काम हुने गरेको छ,’ डिभिजन सडक कार्यालयका इन्जिनियर विजय दराईले भने, ‘बिग्रेपछि, पहिरोले भत्काएपछि पनि मर्मत नगर्ने, पहिरो सफा नगर्ने भन्ने होइन तर
समय लाग्छ ।’
(बेइजिङ) - चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालसँग सीमा जोडिएको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको भ्रमण गरेपछि नेपालमात्रै नभएर भारत र पश्चिमा आँखाले पनि धेरै कोणबाट हेरिएको छ । कुनै पनि राष्ट्रपतिको हैसियतले तीन दशकपछिको तिब्बत भ्रमण, सन् २०१३ मा राष्ट्रपति पद सम्हालेपछि सीको पहिलो तिब्बत भ्रमण, सामरिक महत्त्वको भ्रमणलगायत अनेक कोणबाट यो भ्रमणको व्याख्या गरिएको छ । सीले अन्य प्रान्तको भ्रमण गर्दा यस्तो व्याख्या कमै मात्र हुन्थ्यो ।
नेपाली सञ्चारमाध्यमले सीको भ्रमणलगत्तै तिब्बत चीनको प्राथमिकतामा परेको भन्नेखालका विश्लेषण गरिरहेका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपतिले सन् २०१९ अक्टोबरमा नेपालको भ्रमण नगरेको भए तिब्बतसम्म पुग्नुलाई नेपालमा ठूलो ‘ग्ल्यामर’ को विषय बनाइने थियो । तिब्बत नै चीनको दक्षिण एसिया ‘गेटवे’ भएकाले सीको भ्रमणप्रति नेपालको चासो त छँदै छ, सामरिक प्रतिद्वन्द्विता निभाउँदै आएको भारतले पनि यसलाई निकै चनाखो आँखाले नियालेको छ ।
नेपालसँग १ हजार ४ सय १४ किलोमिटर सीमा जोडिएको तिब्बत चीनको दक्षिण एसिया छिर्ने ढोका हो । सीको भ्रमणले केरुङको रेलमार्गलाई अझ उत्साहित बनाउन सक्छ । यसको प्रथम लाभान्वित पक्ष नेपाल भएकाले नेपाली विश्लेषकहरू उत्साहित हुनु स्वाभाविकै हो । सीको भ्रमणले चिनियाँ विकासको रापताप नेपालतर्फ घुस्न सक्ने अन्तर्यबाट पनि घोत्लिन सकिएला । पश्चिमा आँखाले हेर्दा सीको तिब्बत भ्रमणका अनेकन भाष्य कथिन सक्लान् । राष्ट्रको अभिभावकले आफ्नो देशको कुनाकाप्चामा पुग्नु त दायित्व पनि हुन सक्ला । नेपालका प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले मुलुकको दूरदराज क्षेत्र भ्रमण गर्दाजस्तै अभिभावकीय भूमिकाका रूपमा सीको
तिब्बत भ्रमणलाई सामान्य र सोझो अर्थमा मात्रै पनि
लिन सकिन्छ ।
काठमाडौं (कास)– लक्षित उमेर समूह र जोखिम क्षेत्रमा खोप नपुगिरहेको अवस्थामा सरकारले अझ झन्झटिलो व्यवस्था लागू गरेको छ । केन्द्रमा खोप लगाउनुअघि विद्युतीय माध्यमबाट दर्ता नम्बर लिन अनिवार्य गरेपछि सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन् । यो प्रावधानले इन्टरनेटको पहुँच र क्षमता नभएका ठूलो वर्ग खोप पाउनबाट वञ्चित हुनेछन् ।
स्वास्थ्य आपत्कालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाइले देशभरका सबै स्वास्थ्य कार्यालयलाई साउन १ गते पत्र पठाउँदै खोप अभियानमा धेरै भीडभाड हुने गरेका कारण देखाउँदै यो व्यवस्था लागू गर्नुपरेको जनाएको छ । संक्रमणको उच्च जोखिमसँगै अभिलेख प्रतिवेदनमा समेत कठिनाइ हुने भन्दै खोप लिन बाँकी र इच्छुकले अग्रिम विवरण अद्यावधिक गर्न भनिएको छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार हामीले ‘भ्याक्सिन डट एमओएचपी डट जीओभी डट एनपी’ वेबसाइटमा गएर आफ्नो नाम दर्ता गर्न आग्रह गरेका छौं,’ स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक बद्रीबहादुर खड्काले भने, ‘दर्ता भएको प्रमाण लिएर मात्रै खोप केन्द्रमा जान अनुरोध गरेका हौं ।’ कार्यालयले १८ देखि ५० वर्ष उमेर समूह र छुटेका अन्यले पनि नाम दर्ता गराउन सक्ने उल्लेख गरेको छ । यो व्यवस्था बाध्यकारी बनाइए आगामी दिनमा दर्ता नगराएकाले सहज रूपमा खोप पाउन सक्ने छैनन् । सरकारले सबै नागरिकलाई अनलाइन माध्यमबाट दर्ता गराए मात्र खोप दिने निर्णय गर्नु पूर्ण गलत रहेको ×स्वास्थ्य मन्त्रालय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का पूर्वनिर्देशक डा.बाबुराम मरासिनीले बताए । ‘यसले गर्दा धेरै जना खोप लगाउनबाट वञ्चित हुनेछन्,’ उनले भने, ‘कसैले पाँच पटक खोप लगाउन आउने होइन, एक वा दुई मात्राले पुग्ने भए तेस्रो मात्रा लगाउँदैनन् ।’ सरकारी संयन्त्रले आफ्नो सहजताका लागि अनलाइनबाट नाम दर्ता गर्दा कुनै व्यक्ति, वर्ग वा समुदाय खोप लगाउनबाट वञ्चित हुन नहुने विज्ञ बताउँछन् । ‘यो व्यवस्थाले करिब दुई तिहाइ जनसंख्या प्रभावित हुनेछन्,’ डा. मरासिनीले भने ।
मुख्य सहरी क्षेत्रका बासिन्दाबाहेक अन्य क्षेत्रका अधिकांशले डिजिटलबाट नाम दर्ता गर्न नसक्ने भएकाले यसको विरोध भएको छ ।
दार्चुला (कास)– चिनियाँ सीमा क्षेत्र निगरानी गर्न सरकारले दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ टिंकर गाउँभन्दा माथि छ्यालेकमा सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपी (बोर्डर आउट पोस्ट) निर्माण सुरु गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा असार २५ गते हेलिकप्टरमार्फत सामग्री ढुवानी गरी काम अगाडि बढाइएको ठेकेदारले जनाएका छन् ।
सीमामा बाह्रै महिना सुरक्षाकर्मी बस्ने व्यवस्था हुने गरी भवनको निर्माण भइरहेको छ । यसअघि बर्खाका ६ महिना मात्र उत्तरी क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी रहने गर्थे । एक करोड रुपैयाँको लागतमा भवन निर्माण गरिसक्ने गरी धुलिखेल प्याराडाइज एन्ड एलबी निर्माण सेवाले ठेक्का पाएको छ । निर्माण व्यवसायी लालबहादुर बमले टिंकरमा ६ महिनाभित्रै भवन
निर्माण सक्ने बताएका छन् । ‘मंसिरदेखि वैशाखसम्मै हिमपात भयो । हिउँ परेका बेला ढुवानीमा अप्ठ्यारो भएकाले निर्माण थाल्न ढिलाइ भयो,’ उनले भने । बमले स्थानीय व्यक्तिलाई बीओपी निर्माणको जिम्मा लगाएका छन् ।
सरकारले गत वर्ष नै व्यास–१ मा सशस्त्र प्रहरीको एक गुल्म तथा टिंकर र कौवामा बीओपी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । व्यासको गागामा गुल्म स्थापना भइसकेको छ । कौवामा भने बीओपी निर्माण हुन सकेको छैन । कौवा भारतीय सीमा क्षेत्रमा पर्छ ।
(बझाङ) - घरमाथिको कुलो थुनियो । पानी घरतिर आउन थाल्यो । कुलोको पानी फर्काउन गएका छबिसपाथीभेरा–१ गिठीपाटाका २४ वर्षीय रूपेश गिरी पहिरोमा परे । असार २७ को दिन भएको घटनामा उनलाई पहिरोले २० मिटर तल पुर्‍याएर घाइते मात्रै बनाएन, ढाड भाँचियो ।
शरीरको तल्लो भाग नचल्ने भएको छ । काठमाडौंस्थित ट्रमा अस्पतालमा ढाडको शल्यक्रिया भएको भए पनि नसामा समेत क्षति भएकाले तल्लो शरीर चल्ने बनाउन थप उपचार गर्नुपर्ने चिकित्सकले सुझाएका छन् । तर विपन्न अवस्थाका उनको परिवारलाई उपचार खर्च जुटाउन हम्मे परेको छ । ‘बझाङदेखि जहाजमा काठमाडौं पुर्‍याउन र उपचारमा ५ लाखजति खर्च भइसक्यो । त्यो ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन,’ रूपेशका बुबा मानप्रसाद गिरीले भने, ‘तल्लो शरीर चल्ने बनाउन अझै आठ/दस लाख खर्च लाग्छ भन्छन् । मसँग अब यहाँबाट फर्किने भाडा पनि छैन । कसरी उपचार गराउनु ?’ उनले अहिलेसम्म उपचारमा लागेको क्रण तिर्न घरखेत बिक्री गरे पनि नपुग्ने
भएकाले छोराको थप उपचार गराउन सम्भव नभएको बताए ।
बिहीबार मस्टा गाउँपालिका–५ द्वारी गाउँमा आएको बाढीले गाउँनजिकैको भडाली खोलाको काठेपुल बगायो । गाउँलेहरू आवतजावत गर्ने मूलबाटोमा पर्ने पुल बाढीले बगाएपछि भोलिपल्ट स्थानीय ४५ वर्षीय नरबहादुर बोहरा त्यहाँ साँघु बनाउन खटिए । साँघु बनाउने क्रममा एक्कासि खसेका उनी गम्भीर घाइते भए । जिल्ला अस्पताल बझाङका चिकित्सकले उनको ढाड भाँचिएको हुन सक्ने अनुमान गरेर उपचारका लागि जिल्ला बाहिर रेफर गरेका छन् । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका उनको परिवारलाई बाहिर गएर उपचार गराउन खर्चको समस्या छ । उपचारका लागि सहयोग पाइने आसमा पुगेको उनको परिवारलाई वडा कार्यालयले एउटा सिफारिसपत्र थमाइदिएको छ । ‘साँघु हाल्ने क्रममा लडेर गम्भीर घाइते भएका निजको आर्थिक अवस्था नाजुक भएकाले उपचारमा सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ,’ वडाको सिफारिसपत्रमा लेखिएको छ । यो पत्र देखाउँदै उनको परिवारका सदस्य जिल्ला अस्पतालमा सहयोगका लागि हारगुहार गरिरहेका छन् । ‘समाजको काम गर्नका लागि मरिमेट्ने मान्छे, अहिले उपचार खर्च नपाएर छटपटाउनुपरेको छ,’ उनका आफन्त सन्दीप बोहराले भने, ‘बझाङ अस्पतालले कोहलपुर रेफर गरेको छ । त्यहाँसम्म पुर्‍याउने गाडी भाडा पनि छैन ।’ उनले केही आफन्तसँग सहयोग उठाएर एम्बुलेन्स भाडा जुटाउने प्रयास गरिरहे पनि कोहलपुर पुर्‍याएपछि उपचार खर्च कहाँबाट ल्याउने भन्नेमा परिवार चिन्तामा परेको बताए । ‘उता पुर्‍याउनका लागि त खर्च जुट्ला जस्तो छ । त्यहाँ कति खर्च लाग्ने हो । कसरी बेहोर्ने ?’ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन अधिकारीले विपद्मा परेर घाइते भएकालाई आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवस्था नभए पनि निःशुल्क उपचारका लागि सिफारिस गर्न सकिने बताए । ‘विपद्मा परेर घाइते भएकाको
उपचारका लागि हामीले सिफारिस गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो सिफारिसका आधारमा अस्पतालले ५० हजारदेखि १ लाखसम्मको उपचार
निःशुल्क गरिदिन्छ ।’
मुलुकको संघीय राजधानी सहरमै सग्लो सडक देख्न मुस्किल छ । कुनै खण्डमा थोरै समयमै कालोपत्रे भइहाल्यो भने मात्रै पनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ । चल्तीका कैयौं सडक नै कति गएगुज्रेका छन् भने वर्षामा हिलाम्मे र हिउँदमा धूलाम्मे हुन्छन् । सवारी साधन गुडाउन त मुस्किल पर्छ नै, पैदलयात्रुका लागि पनि हिँडिसक्नुका छैनन् । बाटाभरि जताततै खाल्डाखुल्डी छन्, जसमा परेर सवारी चालक तथा पैदलयात्रुले ज्यानसमेत गुमाएका छन् । संघीय सांसद नै धर्ना बस्दा र पीडितहरू संघर्ष समिति गठन गरेरै आन्दोलित हुँदासमेत नसल्टिएको यो समस्या वर्षौंदेखि उस्तै छ । कारण उही हो— सडक बनाउने तथा मर्मत गर्ने जिम्मा लिएका ठेकेदारहरू समयमा काम सक्दैनन्, सक्न पनि चाहँदैनन्, वषौंसम्म ठेक्का ओगटेर मात्रै बस्छन् । र, काम नगरेबापत तिनलाई दण्ड दिने क्षमता हाम्रा विकास प्रशासकहरू राख्दैनन् । यसरी ठेकेदारहरू विधिभन्दा माथि छन्, सरकारभन्दा बलिया देखिन्छन् । यसको राज एउटै हो— उनीहरू राजनीतिज्ञ, प्रशासक र विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूको संरक्षणमा छन् । त्यसैले बाटोको यो बेहाल सुधार्न राजनीतिले आफूलाई सङ्ल्याउनुपर्छ । राजनीतिकर्मी र कर्मचारीहरूले ठेकेदारसितको अनुचित बसउठ रोक्नुपर्छ, उनीहरूलाई संरक्षण दिन छाड्नुपर्छ ।
भनिरहनु परोइन, नेपालीहरू राज्यलाई निकै उच्च कर तिर्छन् । यसबापत उनीहरूले सरकारबाट शिक्षा–स्वास्थ्यलगायतका सामाजिक सुरक्षा पाउनु त परको कुरा, हिँड्न–
गुड्नधरि गतिलो बाटो पाइरहेका छैनन् । महँगा विलासी गाडीमा हिँड्ने राजनीतिज्ञ तथा राज्याधिकारीहरूलाई खासै मार नपर्ला, बिग्रे–भत्केका सडकबाट सर्वसाधारण अति आजित छन् । खासगरी दुईपांग्रे सवारीसाधन चलाउने र बटुवाहरू बढी प्रताडित छन् । उपत्यकामा कति खण्ड फराकिलो पार्ने भन्दै भत्काइएका छन् । भत्काउन जसरी हतारो गरिन्छ, बनाउन त्यसैगरी आतुरी देखाइन्न । यसरी भत्काइएका कति सडक वर्षौं बित्दा पनि बनाइएका छैनन् । भत्केपाटी–नगरकोट सडक, पेप्सीकोला–सल्लाघारी सडक, ढोलाहिटी–तिलेश्वर सडक, त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडक, नख्खुखोला–भैंसेपाटी–
बुङ्मती सडक, चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडक यसका केही उदाहरण हुन् । अति भएपछि यात्रुहरू भन्न थालेका छन्, ‘खनेर अलपत्र पार्नुभन्दा त बरु पहिलेकै बाटो ठीक थियो ।’ यसैबाट अन्दाज गर्न सकिन्छ, हाम्रो बाटो–विकासको बेहाल कस्तो छ ?
कतिसम्म भने, अस्तव्यस्त सडककै कारण नगरकोट पर्यटकको रोजाइमा पर्न छाडेको खबर छ । पर्यटनलाई तुलनात्मक लाभको क्षेत्र मानेको देशको पर्यटकीय गन्तव्य पुग्ने बाटोकै यस्तो हालत हुनुले हाम्रो विकासको दुर्दशा बताउँछ । शैलुङ र एआईपीएल (आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड) ले संयुक्त ठेक्का लिएको भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट सडक सात वर्षदेखि अलपत्र छ । २०७३ कात्तिकमै काम सक्ने गरी सडक विस्तार गर्ने सम्झौता २०७१ जेठमा भए पनि छैटौं पटक थपिएको ठेक्काअवधि पनि गत असारमा सकिएको छ । भौतिक प्रगति भने जेनतेन ७५ प्रतिशत छ । समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई कुल ठेक्का रकममा १० प्रतिशत हर्जाना लगाएर काममा लगाउनेबाहेक अरू कारबाही भएको छैन । जबकि, काममा ढिलाइ हुँदा लागत ६ करोड रुपैयाँ बढेको छ । जगजाहेरै छ, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरपट्टी रहेका शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष शारदाप्रसाद अधिकारी काठमाडौं उपत्यकामा सडक निर्माणको धेरैवटा ठेक्का ओगटेर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीभित्र पर्छन् । शैलुङले नै ठेक्का लिएको ढोलाहिटी–तिलेश्वर सडक होस् या संयुक्त रूपमा काम गरेको त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडक, पटक–पटक समयावधि थपिँदा पनि सकिएका छैनन् । समयमा काम नसकेपछि हैरान भएका नगरकोटवासीले त डेढ वर्षअघि अधिकारीको फोटो सार्वजनिक सवारी र चौतारोमा टाँसेर विरोधसमेत गरेका थिए ।
दुई वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेका ५६ रुग्ण ठेक्कामध्ये छवटा मात्रै यसबीचमा बनेका छन् । काठमाडौं सडक डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत डेढ सय ठेक्का चालु भएकामा सबभन्दा बढी सडककै छन् । तर यति विघ्न ठेकेदारराज चलिरहँदा पनि समयमा काम नसक्ने र गुणस्तरहीन कार्य गर्ने ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरू आँट गर्दैनन् या चाहँदैनन् । समयोचित काम नभएमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का दिने निकायले चेतावनी दिने, जरिवाना गराउने, भुक्तानी रोक्ने र निश्चित अवधि कटेपछि ठेक्का नै खारेज गरी कालोसूचीमा राख्नुपर्छ । यही प्रक्रियाअनुसार कति ठेकेदार कारबाहीमा पर्दा अधिकारीलगायत केहीले भने सबैतिर उन्मुक्ति पाइरहनु विडम्बनापूर्ण छ । शंकै छैन, दाहालका घरपट्टी भएकैले अधिकारीको ठेक्का अवधि तारन्तार लम्बिरहेको हो ।
यसमा दाहालकै प्रत्यक्ष भूमिका छ कि अधिकारीले उनको नाम भजाएका मात्र हुन्, त्यो खोजीको विषय हो ।
सवाल अधिकारीको मात्र होइन, उनीजस्ता बेलगाम अरू ठेकेदारहरूको पनि हो । जबसम्म शक्तिको पहुँचमा भएकाहरूलाई जिम्मेवार निकायले कारबाही गर्दैनन्, तबसम्म यो समस्या दोहोरिरहन्छ । आवश्यक कार्य नगर्दा सख्त कारबाही हुने हो भने जुनसुकै ठेकेदार उत्तरदायी बन्न बाध्य हुन्छन्, राज्यसँगको सर्त सजिलै उल्लंघन गर्न सक्दैनन् । पहुँचवालाले उन्मुक्ति पाइरहँदा अरू ठेकेदारलाई पनि काम लगाउन मुस्किल पर्छ । तसर्थ, कानुनी शासन कायम राख्न तथा विकास निर्माणका काम प्रभावित नतुल्याउन देशमा जारी ठेकेदारको शासन भत्काउनैपर्छ । सर्तबमोजिम समयमै काम सम्पन्न नगराए ठेक्का दिने निकाय पनि कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ । ठेकेदारहरूको पक्षमा कसैको अनुचित दबाब आउँछ भने त्यसलाई जनतामाझ ल्याएर भए पनि विकास गतिविधि समयमै सक्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । ठेक्का अवधि लम्ब्याउँदा अनावश्यक लागत बढ्ने भएकाले यसप्रति संसद्का सार्वजनिक लेखा समिति र विकास तथा प्रविधि समितिदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मको पनि ध्यान आकर्षित हुनुपर्छ । यो सब वातावरण बनाउन सर्वप्रथम राजनीतिज्ञहरूले निर्माण व्यवसायीसितको स्वार्थ–सम्बन्ध तोड्नैपर्छ ।
अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइलाई लिएर अमेरिकाले असन्तुष्टि
व्यक्त गर्नु उसको हकमा सान्दर्भिक होला तर
कुनै देशको स्वतन्त्र निर्णयलाई उसले कदर गर्न सक्नुपर्छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले हालै
सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न ढिलाइ हुनु सम्भाव्य लगानीकर्ताका लागि राम्रो संकेत नभएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सोझै असन्तुष्टि जनाउनुपहिले नेपाल सरकारलाई उसले पत्र पठाउनुपर्थ्यो वा छलफल गर्नुपर्थ्यो ।
नेपालले ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान पाउने गरी एमसीसीसँग २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता गरेको चार वर्ष पुग्नै लाग्यो । हुन त संसद्देखि सडकसम्म छलफल भएको विषय हो यो । २०७७ असार १६ सम्म सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने नेपालको प्रतिबद्धता थियो । तर, राजनीतिक खिचातानी र सांसदहरूको लामो बहस र दबाबले सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भयो । तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादले सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । साथै सांसदहरूको फरक–फरक विचारले पनि यसलाई प्रभावित पारिराख्यो ।
एमसीसीको पक्षधर मानिएका शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै अब एमसीसी
सम्झौता कार्यान्वयन के हुन्छ भन्ने चासो सर्वत्र छ । एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा सरकारमा रहेको कांग्रेस र माओवादी केन्द्र फेरि सत्ता
साझेदार बनेका छन् । नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अहिले कानुनमन्त्री भएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सम्झौता संसद्मा अघि नबढाइनुमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि दोष थुपारेका थिए । ओलीले सरकार जसको भए पनि नेपालका तर्फबाट सम्झौता भएकाले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने अडान राखेका थिए । तत्कालीन नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र पूर्वउप–प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेता भीम रावलले लगातार विरोध गरेपछि त्यतिबेला यो सम्झौता अगाडि बढ्न सकेन । अब के हुन्छ भन्ने चासो सबैको छ । सरकारले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नहुने गरी सम्झौता कार्यान्यवन सम्बन्धमा यथाशीघ्र निर्णय गरेर यो विषय छिटो टुंग्याउनुपर्छ ।
विगतमा शिक्षक संघ, संगठनहरूले शिक्षक हकहितका लागि केही उल्लेखनीय कामहरू गरेका हुन् । तर, पछिल्लो समयमा तिनले खालि पदीय औपचारिकता पूरा गर्ने सिबाय केही पनि गरेनन् । शिक्षकहरूले भने बर्सेनि रसिद कटाएर पैसा तिर्ने काम गरिरहेकै छन् । शिक्षक नेताहरूले चाहिँ विद्यालयमा हाजिर भएर पढाउनु पनि नपर्ने ! उठाएको पैसा आफ्नै हात जगन्नाथको पारामा खर्च गर्न पनि पाउने ! यता, सेवा सुविधाको हकमा शिक्षकप्रतिको सरकारी परम्परागत वक्रदृष्टि कहिल्यै बदलिएन । यस पटक २०७८/२०७९ को बजेटमा त झन् यो भेदभाव अझै चुलियो । यसैको परिणामस्वरूप निजामती कर्मचारीसरह सेवा सुविधा र अधिकार माग गर्दै स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चका संयोजकलगायतले गत असार १७ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । यसपछि लगत्तै दुई कानुनविद्ले पनि स्वतःस्फूर्त ढंगले शिक्षकहरूको पक्षमा मुद्दा हालेको सुनिएको छ । असार १७ गते हालिएको मुद्दाको तारिख साउन १७ लाई तोकिएको छ र यो मुद्दाको बहस गर्ने अभिभारा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता केशरमणि अर्यालले लिनुभएको छ ।
शिक्षक हकहितका सम्बन्धमा यतिसम्म हुनुलाई ज्यादै उल्लेखनीय कुरा मान्नुपर्छ । यसमा, शिक्षक हकहितकै लागि स्थापना भएको भनिएका र बर्सेनि तमाम शिक्षकहरूले रसिद काटेर पैसा बुझाई मानमनितो गरिएका संघ, संगठन, महासंघका पदाधिकारीहरू खुसी मान्नुपर्ने हो । तर, यही साउन ७ गते सार्वजनिक भएको शिक्षक संघको विज्ञप्तिले सर्वोच्चमा हालिएको मुद्दाप्रति आपत्ति जनाउँदै मुद्दा हाल्ने शिक्षकहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने जनाएको छ । यो त आफ्नो पेसागत हकहितका लागि आवाज उठाउन पाउने मौलिक हकप्रति नै धावा बोलिएको भएन र !
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, च्यामासिंह, भक्तपुर
राजाराम गौतमको ‘एमालेको रामरमिता’ लेख अत्यन्त सटीक लाग्यो । लेखकले नार्सियस र फिनिक्स चरोको कथा हालेर एमाले ओलीगुटको चरित्र चित्रण राम्ररी गरेका छन् । झन्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएको ओली सरकारले संविधानको कार्यान्वयन गर्दै देशलाई अग्रगामी मार्गमा हिँडाउने अवसर पाएको थियो । तर, ३८ महिना नपुग्दै केपी शर्मा ओलीको दम्भका कारण यो सरकार ढल्यो । अहिले १६५ सांसदको विश्वाससहित शेरबहादुर देउवा सत्तासीन छन् । कम्युनिस्ट घटककै केही सांसदले ‘डिरेल’ भैसकेको संविधानलाई ‘लिक’ मा ल्याउनुपर्ने भएकाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बाटोमा हिँड्नुपर्‍यो । ओलीको असंवैधानिक कदमको आलोचना गरेकाले त्यहाँ स्पष्ट दुई धार देखिएको छ, यी न मिल्न सक्छन्, न विभाजित नै हुन सक्छन् । संसद्लाई ब्युँताएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि रिसले चुर भएर बालकोटको बार्दलीबाट सहयात्रीलाई स्टालिन शैलीमा ‘गद्दार’ भनी सराप्न पार्टी अध्यक्षजस्तो व्यक्तिलाई सुहाउँछ ? अझ उनकै योजना र खर्चमा बाँदर जुलुस निकाल्नु कति लाजमर्दो होला ?
भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नु, कार्यान्वयन गर्न मुस्किल रेल तथा पानीजहाजको नाममा राज्यको ढुकुटी तहसनहस गर्नु, बक्यौता नतिर्ने सञ्चार कम्पनीको म्याद थप गर्नु, सत्ताबाट निस्कने बेला सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गर्नु अनि लामो इतिहास बोकेका पार्टीका सहयात्रीहरूलाई तथानाम गाली गर्नुलगायतका गतिविधि कम्युनिस्ट सिद्धान्त बोकेका व्यक्तिलाई पटक्कै सुहाउँदैन ।
ओली सरकारको आलोचना हुँदा बेस्सरी रिस उठ्ने समय पनि थियो । त्यत्रो दुईतिहाइ मत ल्याउँदा पनि खाली आलोचना मात्रै गर्ने कस्तो राजनीतिक संस्कार हो हाम्रो पनि भनिन्थ्यो । संविधान पटक पटक मिचेर असंवैधानिक, अनैतिक निर्णय गर्दै राजनीतिक प्रणाली नै ध्वस्त बनाउन थालेपछि बाध्य भएर नेपाल–खनाल समूह ओली प्रवृत्तिविरुद्ध गएर संविधान र संसद् जोगाएका हुन् । नेपालपक्ष एमालेलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउन चाहन्छ । तर, ओली गुट यहाँ पुग्नै चाहँदैन । विवाद मिलाउन दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले दसबुँदे सहमति गरेर भरमग्दुर प्रयास पनि गरेका छन् । तर कुरा के हो भने, ओली नसुध्रेसम्म एमाले एकजुट हुन्न । अनि सधैं यस्तो रमिता देखाएर कहिलेसम्म पार्टी चलिरहन्छ ?
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, पाली, अर्घाखाँची
यतिखेर माफी दिने र लिनेबीच एमालेभित्र जुहारी नै चलेको छ । कसले कसलाई माफी दिने हो, अनि माफी माग्नुपर्ने मूल पात्र को हुन् भन्ने कुरा तथ्यगत रूपमा केलाउनुपर्छ । संसद् बचाउन खोज्ने, संविधानलाई ‘डिरेल’ हुनबाट जोगाउने र विधिको कुरा गर्नेले माफी माग्नुपर्ने हो कि २–२ पटक संसद् विघटन गर्ने, संविधानको पटक–पटक उल्लंघन गर्ने, अपव्याख्या गर्ने, विश्वासको मत नपाउँदासमेत राजीनामा नदिने, कामचलाउ सरकार भएपछि पनि मनपरी मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने, संवैधानिक परिषद्को ऐन नै संशोधन गरेर स्वेच्छाचारिता देखाउने, संसद् भंग गरेर अध्यादेशबाटै शासन चलाउन खोज्ने अनि राष्ट्रहितविपरीत गिटी–ढुंगाको निकासी गर्ने प्रपञ्च रच्नेले माफी माग्नुपर्ने हो ? पछिल्लो राजनीतिक इतिहास हेर्दा, माधव नेपालहरूले होइन, ओलीले जनतासँग माफी माग्दै दलको नेता परित्याग गर्नुपर्ने हो । तर, यो तहको नैतिकता ओलीमा छैन, आशा गर्नु पनि बेकार छ । यस्तो पात्रलाई गुरु मानेर पार्टी एकताको कुरा गर्नु अर्को विडम्बना हो । ओलीसँग के आधारमा एकता गर्ने, के यो पनि आफैंमा नैतिक प्रश्न होइन । यसर्थ गलत पात्रसँग एकता गर्नुभन्दा नगर्नु नै बेस ।
ओलीलाई कमजोर पार्न माधव नेपाल समूह जति छिटो हुन्छ, सरकारमा जानुपर्छ । सरकारमा गए ओलीकै थुप्रै सांसद् अनि नेता–कार्यकर्ता पनि नेपाल समूहमा आउने निश्चित छ । ओली अरूले भन्दा पनि आफ्नै छुद्र वचन र तानाशाही कामले खुम्चनुपरेको हो । र पनि उनमा चेत पलाएको छैन । ओलीको यस्तो तालले न पार्टी एकता हुन्छ न त आगामी चुनावमा एमालेले बहुमत नै ल्याउँछ । उनकै कारण आज एमालेका हजारौं युवा नेताको भविष्य अन्धकार हुन पुगेको छ । सत्ता दुरुपयोग गर्ने नेताहरूलाई राजनीतिक रूपमा बहिष्करण गर्न सके मात्र राजनीतिमा शुद्धता आउँछ । ओलीले पुष्पकमल दाहालसँग मिलेर नेकपा बनाउँदा ठीक हुने अनि माधव नेपाल दाहालसँग मिल्दा पुच्छर हुने ?
पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले पहिलो पटक संसद् विघटन गरेपछि संसदीय व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त्यो परिघटना व्यक्तिका कारण वा पार्टीभित्रको किचलोका कारण मात्र उत्पन्न भएको होइन, बरु दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामै संकट आएको हो भन्ने विश्लेषण अघि सारे । दुईतिहाइ करिबको सरकार हुँदा पनि राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाका समस्या समाधान हुने दिशामा जानुको साटो ती समस्या झन्झन् बल्झिँदै गएको यथार्थबीच त्यो विश्लेषण सही थियो । तर वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामा संकट उत्पन्न भयो भन्नुको तात्पर्य यो व्यवस्था मृत्युको नजिक पुग्यो, संसदीय व्यवस्थाको शासक वर्ग आफ्नो
व्यवस्था धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो र आम जनता त्यसविरुद्ध विद्रोह गर्न तयार भए भन्ने हुन सक्दैनथ्यो । आजको विश्वव्यापी पुँजीपति वर्गको एकताबद्ध राजनीतिक लयलाई न्यूनतम रूपमा ध्यान दिँदा पनि नेपालको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था यो देशको मात्र एक्लो व्यवस्था होइन । त्यसैले नेपालको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई दीर्घजीवी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत लगातार प्रयत्न हुन्छ भन्ने यथार्थ सरल रूपमा बुझ्न सकिने विषय हो । लोकतन्त्रका सबै आयामलाई समर्थन गर्ने मध्यमवर्गीय नागरिक समाजका अधिकांश प्रगतिशीलसमेत यही व्यवस्थालाई सुधार गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनस्थितिमा हुनुले पनि यो चालु व्यवस्थाको संकटको चरित्रलाई उजागर गर्छ । संसदीय व्यवस्थाभित्रका प्रतिगमनकारी घटनाहरूका कारण जनताको सचेत तप्काले व्यवस्थामै प्वाल परेको देख्न सक्ने परिस्थिति बनेको छ, यो कुरा सत्य हो । तर यो व्यवस्था अहिले यतिखेरै शासक वर्गले धान्नै नसक्ने स्तरमा संकटग्रस्त भइसक्यो भनी बुझ्नु कदापि सही हुन सक्दैन । आजको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई सैद्धान्तिक रूपमा मात्र होइन, आम श्रमजीवीको आवश्यकताको कोणबाट पनि भत्काएर नयाँ व्यवस्थामा जानैपर्ने आवश्यकता जन्मिएकै छ तर त्यसका निम्ति तत्कालै व्यवस्थालाई राजनीतिक क्रान्तिद्वारा फाल्न सकिने वस्तुगत र आत्मगत परिस्थिति तयार भएको छैन । अतिरञ्जनातिर नलागी यथार्थवादी बन्दा निस्कने संश्लेषण यही नै हो ।
यही परिप्रेक्ष्यमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले वैज्ञानिक समाजवाद र दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाबीच जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । एउटा खास विचारधारा र राजनीतिमा आधारित पार्टी बनाउन लागिपर्दा धेरै कष्टसाध्य दुःख, झन्झट र समस्याहरू उपस्थित हुन्छन् नै । त्यसमाथि प्रचण्ड र मोहन वैद्यहरूलाई इन्कार गरेर स्वतन्त्र अस्तित्व, त्यो पनि राज्यले सुन्नैपर्ने न्यूनतम हदसम्म पार्टीलाई पुर्‍याउने सिलसिलामा त्यस पार्टीको नेतृत्व टोलीका अगाडि यावत् चुनौती र समस्या आउने नै भए, आए होलान् । नियत र भावना जति क्रान्तिकारी भए पनि पार्टी सञ्चालनका निम्ति क्रान्तिको कार्यदिशा क्रियान्वयन कति भयो भन्ने विषयले नै सबभन्दा निर्णायक अर्थ राख्छ । पार्टी निर्माण र क्रान्ति सम्पन्न गर्ने अवधिको आकलन तलमाथि हुन सक्छ किनकि वस्तुगत परिस्थितिमा फेरबदल आइरहन्छ । तर कार्यदिशा लगातार अगाडि बढेको चाहिँ हुनैपर्छ, यदि कार्यदिशा सही छ भने त्यस्तो हुनु अनिवार्य हुन्छ । निष्ठावान्, इमानदार र प्रतिबद्ध क्रान्तिकारीहरू संसारकै इतिहासमा त्यस्तो बेला अकर्मण्य भई हडबडीपूर्ण नीतिको सिकार हुन पुगेको पाइन्छ, जब उनीहरूसँग क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने कार्यदिशामा अस्पष्टता उत्पन्न हुन्छ । त्यस्तो कुन प्रकारको समस्या वा उत्प्रेरणाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनमतसंग्रहको माग अगाडि लिएर आउने अवस्था बन्यो, त्यो त अहिले भन्न सकिने कुरा भएन । वैज्ञानिक समाजवाद र दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाबीच जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने त्यस पार्टीको मागले मार्क्सवादी सिद्धान्त, मान्यता र आदर्शसम्बन्धी धेरै विषयलाई प्रभावित गर्न पुगेको छ । त्यसैले त्यस मागले प्रभावित गर्ने आधारभूत केही विषयमा गम्भीर विमर्श जरुरी भएको छ ।
जसरी पुँजीवादी व्यवस्था पुँजीपति वर्गले शासन गर्ने र सम्पूर्ण सम्पत्तिमाथि एकलौटी राइँदाइँ गर्ने व्यवस्था हो, त्यसरी नै वैज्ञानिक समाजवाद श्रमिक वर्गले शासन गर्ने व्यवस्था हो । पुँजीपति र श्रमिक विपरीत वर्ग हुन् । पुँजीवादी व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवाद पनि विपरीत हो । पुँजीवादले निजी सम्पत्तिमा आधारित भएर सबै संरचना र संस्कृति निर्माण गर्छ, मानिस स्वयंलाई समेत मालमा रूपान्तरण गर्छ । वैज्ञानिक समाजवादले भने निजी सम्पत्तिलाई अन्त्य गर्ने दिशामा सामुदायिकीकरणको नीति लिन्छ । यस्तो स्थितिका कारण पुँजीपति वर्ग र श्रमिक वर्गबीच रणनीतिक लक्ष्यकृत राजनीतिक व्यवस्थामा कहिले पनि सहमति र सहकार्य हुन सक्दैन । आफ्नो शासन र दमनको दपेटमा राखेर श्रमिक वर्गलाई खटाईखटाई केही राहत दिन पुँजीपति वर्ग तयार हुन्छ तर त्यो सिंगो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको विषयसँग कहिले पनि सम्बन्धित हुँदैन । मार्क्सवादको ऐतिहासिक प्रस्तावना यही नै हो कि जब वर्गीय व्यवस्थाको कुरा हुन्छ, सत्तासीन वर्ग सहमतिमा अर्को वर्गका निम्ति सत्ता छाड्न कहिले पनि तयार हुँदैन । त्यसैले अन्ततः अनिवार्य रूपमा वर्गसंघर्षको विषय आउँछ, बल प्रयोगको आवश्यकता अगाडि आउँछ । दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादबीच जनमतसंग्रह गरौं भन्ने प्रस्तावले त वैज्ञानिक समाजवादी श्रमिक वर्गीय व्यवस्था शान्तिपूर्ण ढंगले स्थापना सम्भव छ भन्ने प्रस्तावना निर्माण हुन पुग्छ । त्यस्तो प्रस्तावना कति गलत हुन्छ भन्ने यथार्थ विगत दुई सय पचास वर्षको श्रमिक वर्गको आन्दोलनले छर्लंग देखाएकै विषय हो । यो प्रस्तावले आम जनतामा सैद्धान्तिक रूपमा वर्गीय व्यवस्था र राज्यसत्ताजस्ता विषयमा निकै ठूला विभ्रम रोप्ने काम गर्छ । त्यसले श्रमजीवी वर्गीय चेतनामा दूरगामी विकार जन्माउने खतरा उत्पन्न हुन्छ ।
पक्कै पनि कुनै पार्टी वा व्यक्तिले कुनै एक विषयमा दिने अनुपयुक्त नारा वा अभिव्यक्तिकै आधारमा मात्र हतारमा कुनै नकारात्मक बिल्ला लगाइहाल्नु उचित हुँदैन । त्यसको परिणति के हुन सक्छ भन्ने आकलन त गर्नैपर्ने हुन्छ । यदि जनमतसंग्रहको नारा शान्तिपूर्ण संक्रमणको बाटो अख्तियारका निम्ति प्रारम्भिक कदम हो भनेर कसैले आरोप लगायो भने त्यसको उत्तरमा होइन भनेर अडान त लिन सकिएला तर अडानलाई थेग्ने सिद्धान्तको आधार खडा गर्न सकिनेछैन । नेपालको दलाल पुँजीपति वर्गसँग सहमतिमै पनि वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिका लागि जनमतसंग्रहमा जान सकिन्छ भनी स्वीकार गर्ने हो भने आजको दलाल पुँजीपति वर्गले, ‘त्यसो भए अहिलेदेखि वैज्ञानिक समाजवादी कार्यक्रम यही व्यवस्थाभित्रैबाट लागू गर्दै जाऔं, संविधानले पनि समाजवादमा जाने भनेकै छ !’ भन्ने प्रस्ताव अघि सार्‍यो भने कुन तर्कका आधारमा इन्कार गर्ने हो ? दलाल पुँजीपति वर्गको अस्तित्वलाई स्वीकार र उसको समेत सहमतिमा वैज्ञानिक समाजवादमा जान सम्भव छ भनेपछि त त्यस वर्गले अघि सार्ने विकल्पहरूलाई ठाडै इन्कार गर्न मिल्दैन । यसबाट वर्ग र वर्गसंघर्षसम्बन्धी तमाम ऐतिहासिक मान्यताहरूलाई नै नराम्रो क्षति पुग्न जान्छ । श्रमिक वर्गीय आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने हालतमा पुगेका बेला पनि आफ्नो वर्गविरोधी वैज्ञानिक समाजवादमा जान पुँजीपति वर्ग तयार हुनै सक्दैन, मृत्युपत्रमा कुनै वर्गले हस्ताक्षर गरेको इतिहास छ र ? पुँजीवादी व्यवस्थामाथि श्रमिक वर्गीय आन्दोलन हावी भइसकेको अवस्थामा त झन् पुँजीपति वर्गसँगै सहमतिको कुनै अर्थ हुँदैन । आज दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामाथि श्रमिक वर्गीय आन्दोलन हावी भइसकेको अवस्था पनि होइन भन्ने यथार्थ स्पष्टै छ ।
प्रसंग उठाइएको छ, पञ्चायत र बहुदलबीच जनमतसंग्रह सम्भव भयो भने पुँजीवाद र वैज्ञानिक समाजवादबीच किन सम्भव छैन ? आत्मसात् गर्नैपर्ने तथ्य के हो भने, पञ्चायत र बहुदलबीच भएको जनमतसंग्रह परस्परविरोधी वर्गबीच भएको होइन । पञ्चायत दलाल पुँजीपति वर्ग र सामन्त वर्गको व्यवस्था थियो, त्यसमा सामन्त वर्ग हावी थियो । बहुदलीय पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाचाहिँ दलाल पुँजीपति वर्ग हावी हुने परिपाटी हो । त्यतिखेर सामन्त वर्गलाई पनि दलाल पुँजीपति वर्गमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया चलिरहेकै थियो । विक्रम संवत् २०४६ को परिवर्तनपछि जसरी दलाल पुँजीपति वर्ग हावी भयो, त्यसले जसरी तीव्र रुपमा सामन्त वर्गलाई दलाल पुँजीपतीकरण गर्दै लग्योÙ यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि पञ्चायत र बहुदलबीचको जनमतसंग्रह आधारभूत रूपमा विपरीत वर्गबीचको थिएन । दलाल पुँजीपति वर्गले लेख्ने, बोल्ने, सभा–संगठन गर्ने आदि स्वतन्त्रता दिन्छÙ त्यसबाट जनतालाई राजनीतिक स्वतन्त्रताका
क्षेत्रमा फाइदा पुग्छ, त्यो भने बेग्लै पाटो हो । पञ्चायत र बहुदलबीचको जनमतसंग्रहको मात्र के कुरा भयो र, संविधानसभाको निर्वाचन पनि पुँजीपति वर्गीय शासन व्यवस्थाका आधारभूत चीजमा फेरबदल नगरिने ग्यारेन्टी भएपछि सम्भव भएको हो । पहिलो संविधानसभाबाटै संविधान बनाएको हुन्थ्यो भने पनि पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य सम्भव थिएन किनकि शान्ति सम्झौताको
सीमा नै त्यति थियो । जब विपरीत वर्गसँगको सहमतिमा नयाँ व्यवस्था परिवर्तनको बाटोको कुरा आउँछ, त्यसले तमाम खालका अवसरवाद र विकारलाई ढोका खोलिदिन्छ । सिद्धान्त र ज्वलन्त अनुभवलाई समेत व्यवस्था गरी गरिने यस प्रकारका प्रस्तावहरू जति सुन्दर भाषा र भंगिमासहित व्यक्त गरे पनि तिनले सही दिशातिर उन्मुख गराउन सक्तैनन् ।
वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाका निम्ति जनमतसंग्रहको प्रस्तावको सबै अन्तर्य अहिले नै खुल्ने विषय भएन । पूरै सकारात्मक मात्र भएर हेर्दा दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था संकटग्रस्त बन्दै गएको समयमा आफ्नो रणनीतिलाई व्यापक प्रचारमा लाने उद्देश्य त्यसभित्र हुन सक्छ । तर त्यसो गर्न विपरीत वर्गसँग सहकार्य आवश्यक नै छैन, स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो प्रचार सम्भव छँदै छ । वास्तवमा गडबडी रणनीतिक लक्ष्यलाई कार्यनीति बनाउँदा उत्पन्न हुन पुगेको हो । वैज्ञानिक समाजवाद कम्युनिस्टहरूको रणनीतिक लक्ष्यकृत व्यवस्था हो, त्यसलाई आजकै कार्यनीति बनाएपछि त समस्या उत्पन्न हुन्छ नै हुन्छ । आजै प्राप्त हुन नसक्ने विषयलाई अहिलेकै कार्यनीतिक नारा बनाउन पुगेपछि आधारभूत सिद्धान्तहरूमा धक्का पुग्ने निर्णयहरू गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगिन्छ । मार्क्सवादी सिद्धान्तका आधारभूत प्रस्थापनाहरूमा उभिने हो भने कम्युनिस्टहरूका निम्ति आफ्नो रणनीतिक लक्ष्यलाई तत्कालको कार्यनीति बनाएर खेलबाड गर्ने छुट छैन, अझ रणनीतिलाई तत्कालीन राजनीतिक दाउपेचका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्नु त हजार विकृतिहरूलाई निम्तो दिनु मात्र हुनेछ ।
ठिटा, इँटा र बिटा’ शब्दहरू नेपालमा निर्वाचनताका निकै प्रचलनमा आउने गर्छन्, जसले नेपाली युवाहरूको मानमर्दन गर्छन् । पैसा खर्च गरेर युवाहरू परिचालन गरी, डर–धम्की देखाई जित्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता धेरै नेतामा देखिन्छ, चाहे दलहरूको आन्तरिक चुनाव होस् या देशमा हुने जुनसुकै तहका निर्वाचन । यसले देखाउँछ, राजनीतिक दलहरूले युवाहरूमा राजनीतिक चेतना, बहस गर्ने संस्कार र लोकतान्त्रिक आचरणको विकास गराउनुभन्दा निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि ‘मनी’ र ‘मसल’ को प्रयोग गर्नतिर उद्यत गराउँदै लगेका छन् । यही संस्कारको विकासले युवाहरूमा निराशा, तिक्तता र आक्रोश बढिरहेका कारण राजनीति लोकरिझ्याइँ (पपुलिज्म) बाट निर्देशित भई गलत दिशातिर लाग्न थालेको छ । लेखक पल कोलिएरका अनुसार, यस्तो अवस्थाले थप राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ । कोरोना महामारीबीच बढ्दो राजनीतिक अन्योल र संवैधानिक संकटले त्यसमा झन् बल पुर्‍यायो । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि राजनीति फेरि स्थिरतातिर जान्छ कि भन्ने झिनो आशाचाहिँ पलाएको छ ।
नेपाली युवाहरू सुगौली सन्धिभन्दा अघिदेखि परदेशमा काम गर्न जान थालेका थिए र त्यो क्रम निरन्तर छ जसले गर्दा अहिले नेपाली समाजमा युवाहरूको उपस्थिति झन्झन् पातलो हुँदै गएको छ । बर्सेनि यो क्रम बढ्दै जानेछ । औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा भारतसहित करिब १३२ राष्ट्रमा गई काम गर्ने नेपाली करिब ६०–७० लाख छन् भन्ने गरिन्छ । यद्यपि राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदन र अन्य सरकारी आँकडाअनुसार, भारतमा समेत गरेर ५० लाखजति नेपाली नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा छन् । १ लाखभन्दा बढी युवा त अहिले विदेशमै अध्ययनरत छन् । सन् २०११ को जनगणनानुसार, दस नेपालीमा चार जना १६–४० वर्ष उमेर समूहका छन् जसको जनसंख्या १ करोडभन्दा बढी छ । यस हिसाबले उत्पादनशील यो उमेरका आधाभन्दा बढी नेपालीले अहिले परदेशमा सीप, ज्ञान र सृजनशीलता प्रयोग गरी आफू र परिवारका लागि रोजीरोटीको जोहो गरिरहेका छन्Ù तीमध्ये केहीले आर्थिक हैसियतसमेत बढाइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार, नेपालका आधाभन्दा बढी घरपरिवारले विप्रेषण पाउँछन् । हाम्रो बढ्दो खपतमा विप्रेषणको ठूलो हिस्सा छ । विप्रेषणकै कारण केही मात्रामा गरिबी घटेको, आधारभूत शिक्षामा पहुँच बढेको छ । सँगै, युवाहरूको अनुपस्थितिले गर्दा जनसंख्या वृद्धिदर घटेको छ ।
नेपालीले आफूलाई चाहिने क्यालोरी पाउँदैनन् । अवस्था नसुधार्ने हो भने एकतिहाइभन्दा बढी बालबालिका पछि पुड्का हुन सक्छन् ।
राजनीतिमा संख्यात्मक हिसाबले युवा नेतृत्वको संख्यामा कमी छैन । ठूला दलका केन्द्रीय नेतृत्वहरूमा युवाहरूको मनग्य उपस्थिति छ । तर तिनीहरूले विकसित देशहरूका विकासका पहललाई हाम्रो परिवेशमा ढालेर जनतामाझ देशको वर्तमान आर्थिक–सामाजिक समस्याको समाधानका लागि दिगो रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको अपवादबाहेक विरलै देखिन्छ । युवाहरूलाई दलका विभिन्न संरचनामा समावेश गरी राजनीतिमा संलग्न गराएर मात्रै दीर्घकालीन रूपमा तिनको क्षमतालाई उत्पादनशील रूपले परिचालन गर्न सकिन्न । कुत असुल्न, दलाली र गुन्डागर्दी गर्न अनि नेतृत्वमा रहेकाहरूको परजीवी हुन लगाई युवाहरूलाई अन्तहीन भविष्यको अनिश्चित राजनीतिमा झोस्ने काम राजनीतिक दलहरूबाट हुनु हुँदैन । विडम्बना, नेपालको राजनीति त्यतैतिर बढिरहेको छ ।
विभिन्न प्रतिवेदन र अध्ययनहरूले नेपालको विकासका लागि युवा जनशक्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्रोत भनी औंलाएका छन् । नेपालमा ६५ वर्ष नाघेका नागरिकको जनसंख्या २०८४ सालमा ७ प्रतिशत र २१११ सालमा १४ प्रतिशत पुग्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रक्षेपण छ । हामीलाई विकास गर्ने समय करिब २५ वर्षभन्दा कम छ भनिएको छ । यस हिसाबले द्रुत र दिगो विकास नगरिए युवा वर्ग विकासको प्रतिफल उपभोग गर्न नपाउँदै प्रौढ पुस्तामा पर्नेछ । उत्पादनशील युवाहरूलाई बाहिर पठाउनाले नेपाल र नेपाली समाजको समय जसरी विकास नभई गुज्रेको छ, त्यो निकै संवेदनशील छ । युवाहरूलाई विदेश पठाउनु हुन्न भन्ने होइन, किनकि नेपालको विकासको गति र यहाँको राजनीतिक अस्थिरताका कारण अझै केही वर्ष नेपाली युवाहरूलाई विदेश नगई सुखै छैन, तर उत्पादनशील युवाहरू बिदेसिन बाध्य हुँदा देशलाई थुप्रै नकारात्मक असर परेको छ । जुनसुकै राष्ट्रमा स्वदेशी लगानी बढाउन वा विदेशी लगानी भित्र्याउन, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र विस्तार गर्न गुणस्तरीय शिक्षा र सीप हासिल गरेको युवा जनशक्तिबिना सम्भव छैन । प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरता भए पनि शिक्षित
तथा गुणस्तरीय सीप हासिल गरेको युवा जनशक्तिबिना तिनबाट देशले फाइदा लिन सक्दैन । नेपालले
पनि यस्ता अप्ठ्यारा बेहोर्नुपरेको छ र युवाहरूको उपस्थिति पातलिने क्रम जारी रहे भविष्यमा अप्ठ्याराहरू बढ्दै जानेछन् । आज नेपाली श्रम बजारमा उत्पादन र उद्योगमा मात्र हैन, सेवा क्षेत्रमा समेत आवश्यक सीपयुक्त जनशक्ति पाउन सजिलो छैन । अहिलेको धेरै युवा श्रमशक्ति बजारको मागभन्दा
निकै टाढा छ ।
‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ भने देखिन्छ । निजी क्षेत्रमा युवाहरूको उपस्थिति बाक्लिँदै गएको छ । युवाहरूमा स्वदेशै बसी या विदेश गई सीप सिक्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा युवाहरूको उल्लेख्य वृद्धि हुन थालेको छ । अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार, करिब ३० हजार नेपाली युवा अहिले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नेपाल सरकारका संयन्त्रभन्दा बाहिर क्रियाशील छन् । बैंकिङ, पर्यटन, ऊर्जा क्षेत्रका साथै र केही सफल कृषि उद्यमीहरूमा युवाहरूको चम्किलो अनुहार देखिन थालेको छ । युवाहरू कि बजारमा उपलब्ध रोजगारीमा उपयोगी हुन सकून् कि त आफैंले स्वरोजगारीका उपायहरू अँगाल्न सकून् भनेर शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । आशा गरौं, आगामी दिनमा निष्ठा, सिद्धान्त, ज्ञान र चेतनाले भरिएका युवाहरू सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा बाक्लिँदै जानेछन् र तिनको उपस्थितिका कारण देश विकासको हरेक पहल झन् प्रभावकारी हुनेछÙ आगामी दिनमा यो देशमा युवाहरू हराएका छन् भन्नुपर्नेछैन ।
पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
- भगवती सेढाई
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले यस वर्षदेखि हरेक जुलाई २५ लाई ‘वर्ल्ड ड्राउनिङ प्रिभेन्सन डे’ घोषणा गरेको छ । पानीमा डुबेर हुने मृत्यु रोकथाम गर्ने उद्देश्यका साथ यसको थालनी गरिएको हो । विश्वभरि बर्सेनि २ लाख ३५ हजार मानिसको पानीमा डुबेर मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक भेटिन्छ । हामीमध्ये पनि धेरैको पानीमा डुबेर उम्केको कहालीलाग्दो अनुभव हुने गर्छ । यो समस्या निकै भयावह भए पनि, यसको रोकथामका लागि ठोस योजना हामीले बनाउन सकेका छैनौं । सन् २०१३ देखि २०१५ सम्म नेपाल प्रहरीको ‘डुबी मृत्यु’ शीर्षकमा दर्ता भएका मृत्युहरूलाई आधार मानेर गरिएको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा खोला, पोखरी, कुलो, पानीले भरिएका खाल्डाखुल्डी तथा इनारमा डुबेर प्रत्येक वर्ष ५०० भन्दा बढीले ज्यान गुमाउँछन् । तर, डुबेर हुने मृत्युका सबै घटना हाम्रो जस्तो कम विकसित देशमा प्रहरीसम्म आइपुग्दैनन् । त्यसैले पनि यसको संख्या धेरै भएको सहजै भन्न सकिन्छ । विदेशमा पनि नेपालीहरूको डुबेर मृत्यु हुने गर्छ । अस्ट्रेलियामा मात्रै पछिल्लो सात वर्षमा १४ नेपालीको समुद्रमा डुबेर मृत्यु भयो । जापानलगायत अन्य राष्ट्रबाट पनि नेपालीहरूको डुबेर मृत्यु भएका समाचार बेलाबेला आइरहन्छन् । स्वदेश तथा विदेशमा पानीमा डुबेर भएका मृत्युको संख्याले नेपाल उच्च जोखिममा छ भन्ने देखाउँछ ।
सेढाई पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसकी उप–प्राध्यापक हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको असार २८ को फैसलापछि नेपाली राजनीतिमा तीनवटा परिदृश्य देखा परे । पहिलो, निहित स्वार्थसिद्धिका निम्ति संवैधानिक अधिकार, कानुनी प्रावधान तथा पदीय दायित्वको आत्मकेन्द्रित दुरुपयोग गरेबापत केपी शर्मा ओली सरकारले प्राप्त गरेको नसिहत । दोस्रो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात् नेपाली राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण, जसमा ओली नेतृत्वको समूह एउटा पक्ष हो भने संवैधानिक लोकतन्त्र तथा राजनीतिक उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमविरुद्ध स्थापित गठबन्धन अर्को । ओली गठबन्धन गणतन्त्र नेपालको सबैभन्दा प्रतिगामी तथा व्यवस्थाविरोधि सिद्ध भएको छ भने ओलीको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध स्थापित पाँचदलीय गठबन्धनमाथि संविधानप्रदत्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने अभिभारा आइलागेको छ । तेस्रो, जनअपेक्षाबमोजिम न्यायपूर्ण र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न मौजुदा अवस्थामा कुनै पनि गठबन्धन सफल नहुने हुँदा सामाजिक न्याय र समृद्धिका दृष्टिले रणनीतिक महत्त्वका दूरगामी प्रभाव पार्न राजनीति नै फेर्नुपर्नेछ । उर्लंदो राजनीतिक निराशामा सरकारहरूको ‘डेलिभरी डेफिसिट’ बाट पैदा हुने यही तेस्रो बुँदा कारक रहेको हुँदा या त दलहरू आन्तरिक सुधार गर्न सक्षम हुनुपर्नेछ या जनताका यिनै निराशालाई सम्बोधन गर्ने गरी ढिलोचाँडो निर्माण हुने नयाँ मोर्चाको सामना गर्न तयार हुनुपर्नेछ । यो आलेख यिनै विषयवस्तुवरिपरि केन्द्रित छ ।
ओली नेतृत्वको गठबन्धन
लगभग तीन वर्ष लामो कार्यकालमा ओलीले सकारात्मक–नकारात्मक दुवै किसिमका स्मारक स्थापित गरेका छन् । सीके रावत नेतृत्वको पृथकतावादी समूहलाई मूलधारमा ल्याउनु, ‘विप्लव’ नेतृत्वको भूमिगत माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउनु, नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्नु ओली सरकारका उल्लेख्य उपलब्धि हुन् । आन्तरिक सत्ता राजनीतिको संकट टार्न छिमेकी मुलुकसितको सम्बन्धको दुरुपयोग तथा राष्ट्रवादको अपव्याख्या, संवैधानिक लोकतन्त्र नै संकटमा पर्ने गरी राष्ट्रपतिको सहयोगमा संविधानको अपव्याख्या, दुरुपयोग र संवैधानिक प्रावधानहरूमाथि प्रहार, पदीय गरिमा नै बिर्सेर राष्ट्रिय नेताहरूमाथि गरिएका नीच टिप्पणी एवं सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाको आत्मकेन्द्रित अपव्याख्या ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा गरेका त्यस्ता अपराध हुन् जसले उनका राम्रा कामहरूसमेत ओझेल पारिदिएका छन् ।
सत्ता टिकाउनकै निम्ति ओलीले दुईचोटि प्रतिनिधिसभा विघटन गरे, एक पटक संसद्मा विश्वासको मत गुमाएको स्वीकार गरिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीमा अनधिकृत दाबी पेस गरे, राजनीतिक दल तथा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिको प्रावधान परिवर्तन गर्ने अध्यादेश जारी गरे, जनजीविकाका आधारभूत सवालहरूप्रति बेपरबाह हुँदै जनताको भावनामाथि खेल्ने गरी राजनीतिलाई पन्थसापेक्ष धार्मिक रङ दिने कोसिस गरे । ओलीका असंवैधानिक कुकृत्यहरूमाथि प्रतिप्रश्न नै नगरी लाहाछाप लगाउने भूमिकाले महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाभियोगको हकदार बनाइदिएको छ भने, नेकपा एमालेभित्र ओली समूहमा आशालाग्दा भनिएका नेताहरूको संवैधानिक लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामाथि पनि प्रश्न उठाइदिएको छ । राजनीतिक निर्णयमा चुकेपछि भाषा मात्रै मीठो भएर नपुग्दो रहेछ ।
पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको स्थिति २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको जस्तै भएको छ भने, उनका असंवैधानिक कामहरूको बचाउ गर्दै साथ दिने नेता–कार्यकर्ताहरूको हविगत तत्कालीन राजाका गृहमन्त्री कमल थापाको भन्दा फरक मान्न सकिँदैन । आधुनिक लोकतन्त्रमा वैधता गुमाइसकेपछि शक्ति प्रदर्शनको महत्ता त्यति नै हुन्छ जति अमेरिकी लोकतन्त्रमा ट्रम्प समर्थक हिंसक भीडको थियो । हेर्न बाँकी हाम्रो व्यवस्थापिकाको सामूहिक विवेक र सामर्थ्य हो, जसको मूल्यांकन पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिप्रति अख्तियार गर्ने सझा धारणाले गर्नेछ । सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट संकेतपछि पनि महाभियोगको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गरिएन भने प्रतिनिधिसभा राजनीतिक नैतिकता गुमाएको नांगो शक्ति अभ्यास गर्ने थलो मात्रै साबित हुनेछ ।
ओलीले गत पुस ५ गते पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपश्चात् नेपाली राजनीतिमा नेताहरूले आफ्नो निर्णय, कार्यशैली तथा अभिव्यक्तिहरूमार्फत आफ्नै किसिमको छवि स्थापित गरेका छन् । असार २८ गतेसम्म आइपुग्दा लोकतन्त्र, संविधानवाद र विधिको शासनका निम्ति आफ्नो दलीय आबद्धतालाई समेत दाउमा राखेर माधवकुमार नेपालले जुन जोखिम मोले, त्यसले उनलाई विशिष्ट राजनीतिक उचाइ दिलायो । राजनीतिक वैधताका आधारमा ओलीले नेपाललाई नभई नेपालले ओलीलाई शरण दिने स्थिति बनेको छ । जबजब संवैधानिक लोकतन्त्र तथा विधिको शासन संकटमा पर्नेछ, माधवकुमार नेपाल दृष्टान्त बन्नेछन् ।
देउवाले पार्टीभित्र र बाहिरबाट आफूमाथि पटकपटक हमला भइरहँदा पनि संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै गतिविधि कांग्रेसले गर्दैन भन्ने अडान दोहोर्‍याइरहनु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राज्यका संस्थाहरूबीचको सम्बन्धको गहिरो बुझाइ थियो । देउवाको यही अभिव्यक्तिविरुद्ध बीपीलाई कोट गर्दै राजाको शासनमा अदालत परिसरमै उपस्थित भएर बीपीले अदालतलाई सचेत गराएको इतिहासको प्रसंग पनि कोट्याइयो । तर वंशविशेषको अधीनस्थ राज्यसंयन्त्रभित्र न्यायालयको अवस्थिति र लोकतान्त्रिक गणराज्यमा न्यायालयको अस्तित्वको ख्याल राखिएन । आधुनिक राज्यमा न्यायालयलाई विपक्षजस्तो गरी प्रस्तुत गर्नु राज्यव्यवस्था विघटनतिर लैजानु हो ।
नयाँ गठबन्धन र यसका आर्किटेक्टका हैसियतले देउवा–प्रचण्ड–नेपाल–खनाल–भट्टराई–यादवमाथि आशा र आशंका दुवै छन् । एक, उनीहरूमध्ये कसैले पनि निःसंकोच विश्वास गर्नलायक नजिर स्थापित गर्न सकेका छैनन् । दुई, नेता प्रधान होइन, नेताको पृष्ठभूमि निर्णायक हुन्छ । संसदीय अंकगणितमा सबैको स्थिति कमजोर छ । एमाले र जसपाको विवादले असमञ्जस पैदा गरेको छ । तीन, पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको वक्तव्य तथा जसपाभित्र ठाकुर–महतो समूहको सन्दिग्ध भूमिकाले संविधानका उपलब्धिहरूको जगेर्ना गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन । कमजोर दार्शनिक आधार तथा नीतिगत लाभ ऋणात्मक हुँदाहुँदै पनि राज्यप्रशासनको पन्थनिरपेक्ष चरित्र तथा संघीय संरचानाविरुद्ध छद्म अभियान चलाउनु र त्यसलाई नै चुनावी राजनीतिको अस्त्र बनाउन खोज्नु जनताको परम्परागत मनोविज्ञानमाथि खेलेर समाज पुनःसंरचनाका अहम् मुद्दाहरूलाई दबाउन सकिन्छ भन्ने दुस्साहसभन्दा बढ्ता अरू के हुन सक्छ ? चार, प्रधानमन्त्रीका हैसियतले पार्टीको आन्तरिक सत्ता संघर्षका कारण आइलाग्ने बाछिटाहरूबाट बच्दै सफल सरकार चलाउनु देउवा तथा समग्र गठबन्धनका लागि अझ सकसपूर्ण हुनेछ । पाँच, महामारीको कहरभित्रै थलिएको अर्थतन्त्रलाई त्राण दिँदै जनअपेक्षाबमोजिम डेलिभरी गर्नु ओली सरकारको भन्दा कम सकसपूर्ण छैन ।
नेपाली अर्थराजनीतिका संरचनागत समस्या र
सरकारहरूको ॅडेलिभरी डेफिसिट’
पटकपटक व्यवस्था परिवर्तन भएर पनि जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार नहुनु, ‘एलिट क्याप्चर’ का कारण समाजको समतामूलक तथा न्यायपूर्ण रूपान्तरण धरातलमा नदेखिनु र राज्यप्रशासनमा सुशासन तथा पारदर्शिता स्थापित हुन नसक्नुकै कारण आम मानिसमा निराशा छाएको छ । पुनर्वितरण, पारदर्शिता र आर्थिक वृद्धिमा आवश्यक सुधार गर्न नसक्नुले नेपाली लोकतन्त्र केवल प्रक्रियावादी चुनावी लोकतन्त्रमा सीमित हुन पुगेको छ ।
जनजीवनमा देखिने गरी परिवर्तन ल्याउन सदियौंदेखि सत्ताले थोपरेको आर्थिक–सामाजिक एवं अवसरको वितरणमा गरिएको विभेद सुधार्ने गरी ठोस नीतिगत हस्तक्षेप जरुरी हुन्छ । २०२१ र २०५८ सालको भूमिसुधार, कमैयामुक्ति, हलिया मुक्तिजस्ता कदमहरूले पनि न जनताको वर्गीय अस्तित्व परिवर्तन गर्न सके न त गरिब र भूमिहीन किसानहरूले आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्राप्त गरे । आरक्षण व्यवस्थाले पनि आर्थिक वर्गलाई बेवास्ता गर्दै केवल पहिचानमा आधारित सीमान्तीकरणलाई मात्रै सम्बोधन गरेको हुँदा यो एकांगी र अधुरो छ । ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेर पनि २५ प्रतिशत मानिस भूमिहीन भएको, आधाभन्दा बढी किसान परिवार आधा हेक्टरभन्दा कम जमिनमाथि निर्भर हुनुपरेको, उपल्लो ५ प्रतिशत परिवारको स्वामित्वमा ३७ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन र तल्लो ४७ प्रतिशत परिवारसित केवल १५ प्रतिशत भूमि रहेको, माथिल्लो १० प्रतिशत जनसंख्यासित कुल राष्ट्रिय सम्पत्तिको ३९.१ प्रतिशत रहेको र तल्लो १० प्रतिशत जनसंख्या मात्र २.६५ प्रतिशत सम्पत्तिमा खुम्चिएको तथ्यांकले विगतमा शासनहरूले लादेको स्रोत र अवसरको केन्द्रीकरणमाथि अंकुश लगाउने गरी हाम्रो गणराज्यको संरचना निर्माण हुन नसकेको देखिन्छ ।
समाजमा शक्ति संरचनाको जटिलताका कारण विरासतमा प्राप्त असमानता र विभेदलाई सोझै अंकुश लगाउन नसक्दा राज्यले अंगीकार गर्ने कर प्रणालीसँगै शिक्षा–स्वास्थ्यजस्ता सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाहरू, रोजगार, उद्यमशीलता तथा सामाजिक सुरक्षाको नीतिमा नेपाली राज्यले लिएको नीति निम्छरो र विभेद बढाउने खालको छ । लगभग ८० प्रतिशत गरिब र ग्रामीण बालबालिका पढ्ने सार्वजनिक विद्यालयहरूले ग्रेड सिस्टम लागू नहुँदासम्म १०० मा १९ विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण गराउन सक्थे जुन निजी विद्यालयका तुलनामा ६० प्रतिशत कम हो । अवसरको वितरण, वर्ग उत्थान तथा समानता र राज्यको शान्ति सुरक्षामा यस्तो शिक्षा प्रणालीले पार्ने दीर्घकालीन प्रभाव कस्तो होला ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा घट्दो सरकारी लगानी र बढ्दो निजीकरणले सरकारहरू ‘भोटर क्लास’ प्रतिको उत्तरदायित्वबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ ।
विडम्बना, नेपालमा पुनर्वितरण, सुशासन तथा आर्थिक विकासका निम्ति आक्रामक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने राजनीतिक दलहरूको संरचना, संस्कार र भूमिका नै सन्दिग्ध छ । कर्मचारीतन्त्र, संवैधानिक निकाय, शिक्षण संस्था तथा राज्यका सबैजसो संरचनाको व्यापक दलीयकरण, राज्यको तल्लो एकाइसम्म फैलाइएको ‘रिसोर्स–एक्स्ट्र्याक्टिङ नेटवर्क’ एवं निजी उद्यमी र राज्यको दायित्वभित्र पर्ने सेवाक्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको आडमा मौलाएको कुनै पनि राजनीतिक दलले जनअपेक्षा सम्बोधन हुने गरी परिवर्तन ल्याउन या सांगठनिक हिसाबले आत्मघाती निर्णय लिन या आफ्नै कारण उत्पन्न तृष्णालाई आधार बनाएर निर्माण हुने नयाँ राजनीतिक मोर्चासित पराजित हुन तयार हुनुपर्नेछ । माथि संकेत गरिएका संरचनागत समस्याहरूलाई हल गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सामर्थ्यमै आगामी सरकारहरूको सफलता निर्भर रहनेछ ।
(काठमाडौं) - असार दोस्रो साता भर्चुअल भएको वार्डेन सम्मेलनमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (चिफ वार्डेन) अणनाथ बरालले निकुञ्जको ब्रिफिङ गर्ने क्रममा सेनाले समन्वय नगरेको आरोप लगाएका थिए । उनको भनाइलाई तत्कालै सेनाको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु निर्देशनालयका निर्देशक सहायक रथी (जर्नेल) हिमांशु खड्काले खण्डन गरेका थिए । सम्मेलन सकियो, तर त्यसमा सहभागीलाई प्रस्ट भयो निकुञ्ज प्रमुख र सेनाबीच समस्या छ ।
(काठमाडौं) - करिब तीन महिनापछि लामा तथा मध्यम दूरीका सवारी शनिबारबाट सञ्चालनमा आएका छन् । कोभिडका कारण वैशाख १६ देखि गरिएको निषेधाज्ञासँगै ठप्प लामा तथा मध्यम दूरीका सवारीलाई साउन ४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चालन अनुमति दिएको थियो । सोहीअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठप्प सवारीलाई सञ्चालन गर्न भनेको थियो ।
(काठमाडौं) - गत आर्थिक वर्षमा सेयर बजारका लगानीकर्ताले करिब ३ खर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् । यो गत साउनदेखि असारसम्म लगानीकर्ताले सेयर बिक्रीमार्फत हात पारेको नाफा हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सेयर कारोबारबाट लगानीकर्ताले करिब १९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका थिए ।
गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लगानीकर्ताले औसत ५ प्रतिशत रकम पुँजीगत लाभकरका रूपमा सरकारलाई तिरेका छन् । यसअन्तर्गत गत जेठसम्म करिब १४ अर्ब १४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिरिएको छ । सोही अवधिमा अग्रिम कर कट्टीबापत १ अर्ब ३९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ कर संकलन भएको छ । यसरी पुँजीगत लाभकर र अग्रिम कर कट्टीबापत गरी गत आर्थिक वर्षमा कुल १५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ कर संकलन भएको छ । करिब तीन दशकको पुँजीबजारको यात्रामा एक वर्षमा पुँजीगत लाभकरमार्फत यति धेरै रकम सरकारलाई प्राप्त भएको यो हालसम्मकै उच्च हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको कर संकलन १३ गुणा बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सेयर बजारबाट १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र कर संकलन भएको थियो । अघिल्ला वर्षहरूमा बजारमा सामान्य वृद्धि मात्र भएकाले लगानीकर्ताले धेरै नाफा कमाउन पाएका थिएनन् । यो वर्ष बजार निरन्तर बढिरहेको छ । सोही कारण करबापतको रकम पनि बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।
काठमाडौं (कास)– बुद्ध एयरले यही साउन १७ देखि पोखराबाट नेपालगन्ज सीधा उडान गर्ने भएको छ ।
सुरुमा साताका तीन दिन (आइतबार, बुधबार र शुक्रबार) उडान गर्ने र पछि दिनदिनै उडान गर्ने योजना बनाएको कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यी उडानबाट दुवै ठाउँका पर्यटकीय स्थलमा चहलपहल बढ्ने अपेक्षा गरिएको कम्पनीका निर्देशक रूपेश जोशीले बताए ।
(दार्चुला) - जिल्लाका पालिकाहरूले भारत र चीनसँगका सीमा नाकामा नयाँ भन्सार कार्यालय स्थापना र पुराना छोटी भन्सार कार्यालय पुनःस्थापना गर्न माग गरेका छन् । द्वन्द्वकालमा विस्थापित छोटी भन्सार अझै पुनःस्थापना भएका छैनन् । यसबाट सरकारले बर्सेनि राजस्वमा ठूलो रकम गुमाउनुपरेको छ ।
विगतमा सञ्चालनमा रहेका तिंकर, सीतापुल, दत्तु र जौलजिवी छोटी भन्सार कार्यालय अहिले बन्द छन् । भारतीय सीमा क्षेत्र लाली र तिंग्रम झोलुंगे पुल बनेपछि पालिकाहरूले थप भन्सार कार्यालय राख्न माग गरेका हुन् । व्यास गाउँपालिकाले विस्थापित छोटी भन्सार कार्यालय पुनःस्थापनासँगै तिग्रममा नयाँ छोटी भन्सार कार्यालय स्थापना गर्न पटक–पटक आग्रह गरेको छ । लेकम गाउँपालिकाले पनि दुई वर्षदेखि लालीमा नेपाल–भारत जोड्ने झोलुंगेपुल बनेपछि छोटी भन्सार कार्यालय स्थापनाका लागि पत्र पठाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष परमानन्द जोशीले बताए ।
व्यासको सीमा तिंकर तथा सीतापुलका छोटी भन्सार कार्यालय पुनःस्थापनाका लागि धेरैपटक अनुरोध गरिएको व्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलीपसिंह बुढाथोकीले जानकारी दिए । गाउँपालिकामा निर्वाचित भएदेखि नै छोटी भन्सार सञ्चालन गर्न र नयाँ ठाउँमा स्थापनाका लागि विभागलाई अनुरोध गरिएको उनको भनाइ छ ।
भन्सार नहुँदा सामान आयात गर्दा संकलन हुने भन्सार महसुलको राजस्वसमेत चुहावट हुने गरेको छ । भारत र चीनका नाकामा बजारको राम्रो सम्भावना रहेकाले छोटी भन्सार छिटो पुनःस्थापना गर्नुपर्ने यहाँका व्यापारीको माग छ । सरकारले स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न नसकेको दार्चुला उद्योग
वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष इन्द्रदेव पन्तले बताए ।
सीतापुल र तिंकरमा छोटी भन्सार सञ्चालन भए व्यापार सहज हुने स्थानीय व्यापारी दानसिंह तिंकरीको भनाइ छ । भन्सार नहुँदा यहाँका स्थानीय बजारमा सामान बिक्री गर्न पनि अप्ठ्यारो हुँदै आएको व्यवसायीको गुनासो छ ।
परासी (कास)– पूर्वाधार र जनशक्ति अभावले पश्चिम नवलपरासीस्थित महेशपुर नाम मात्रको मूल भन्सारमा सीमित छ । पूर्वाधार र गोदाम नहुँदा राजस्व संकलन प्रभावित छ । मूल भन्सार घोषणा भएको तीन वर्ष बितिसक्दासमेत पहुँच सडक, पूर्वाधार र कर्मचारी पदस्थापन गरिएको छैन । जसकारण यहाँ छोटी भन्सारसरह काम भइरहेको छ ।
भन्सारमा सामान जाँचका लागि आवश्यक गोदाम, कर्मचारी र प्राविधिक नभएपछि ठूला व्यवसायीले यो नाका प्रयोग गर्दैनन् । ठूलो मात्रामा सामान आयात गरिएपछि भण्डारणका लागि गोदाम पनि छैन । यसलाई २०७५ साउन १ मा मूल भन्सार घोषणा गरिएको थियो । आवश्यक पूर्वाधार र सञ्चालनको वातावरण तयार पारिदिन स्थानीय जनप्रतिनिधिले पटक–पटक माग गरे पनि पूरा हुन सकेको छैन । नाकाबाट भुस, धान तथा खाद्य सामग्रीबाहेक अन्य सामान आयात न्यून छ । गोदाम नहुँदा अन्य सामान यो नाका हुँदै निर्यात र आयात हुन सकेको छैन । मूल भन्सार भए पनि केन्द्रले यस भन्सारलाई छोटी भन्सारसरहको राजस्व संकलनको जिम्मा दिने गरेको छ । गएको आर्थिक वर्षमा २६ करोड ७० लाख रुपैयाँको राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको भन्सार कार्यालयले लक्ष्य प्राप्ति गरेको महेशपुर भन्सार कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद अर्यालले बताए । गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयले २७ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । ‘छोटी भन्सार रहँदा भएका संरचना नै अहिले कायम छ । गोदाम र सडक फराकिलो भए अहिलेको भन्दा दोब्बर राजस्व संकलन हुने थियो,’ अर्यालले भने, ‘तालुकदार निकायमा मैले पटकपटक पत्राचार गरेको छु । तर गोदामका लागि आवश्यक जग्गा किन्न सकिएको छैन । जनशक्ति कम छ ।’
काठमाडौं (कास)– नेपालका लागि बजाज मोटरसाइकलको अधिकृत वितरक हंसराज हुलास चन्द एन्ड कम्पनी प्रालिले जनकपुरमा नयाँ सोरुम ओम अटोमोबाइल्स उद्घाटन गरेको छ । अझ बढी सुविधासहित बजाज सेल्स, सर्भिस र स्पेयर्स देशभर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले जनकपुरमा सोरुम सञ्चालनमा ल्याइएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले बजाजको नयाँ सोरुम ओम अटोमोबाइल्सका प्रोपराइटर सन्तोषकुमार साहलाई डिलरसिप प्रदान गरेको छ ।
काठमाडौं (कास)– खल्ती डिजिटल वालेटले मोबाइल नम्बरमा टपअप गर्दा १० प्रतिशत क्यासब्याकको योजना ल्याएको छ । खल्तीमा दर्ता गरिएको मोबाइल नम्बरमा टपअप गर्दा उक्त क्यासब्याक पाइनेछ । यो योजना साउन ७ देखि निश्चित अवधिका लागि मात्र लागू हुने खल्तीले जनाएको छ । यो योजनाअनुसार क्यासब्याक एक महिनाको अधिकतम सय रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ ।
काठमाडौं (कास)– एनएमबी बैंकका ग्राहकले बिगमार्टमा २५ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । बैंकको मोबाइल बैंकिङमार्फत भुक्तानी गर्दा बिगमार्टमा बुधबार र शनिबार फलफूल तथा तरकारी खरिदमा २५ प्रतिशत वा ३ सय रुपैयाँसम्म छुट पाउने भएका हुन् ।
काठमाडौं (कास)– नेपालस्थित कन्सुलरहरूको छाता संगठन अनररी कन्सुलर कर्प्स–नेपाल (एचसीसी–एन) को डिनमा लोकमान्य गोल्छा नियुक्त भएका छन् । नेपालस्थित मोरक्कोका लागि महावाणिज्यदूत वसन्तकुमार चौधरीको एकवर्षे कार्यकाल सकिएसँगै आगामी एक वर्षका लागि एचसीसी–एनको डिनमा गोल्छा चुनिएका हुन् । उनी पोल्यान्डका लागि अवैतनिक महावाणिज्यदूत तथा गोल्छा अर्गनाइजेसनका अध्यक्षसमेत हुन् । एचसीसी–एनको १४ औं ‘चार्टर्ड डे’ को अवसरमा शुक्रबार आयोजित एक औपचारिक समारोहबीच तत्कालीन डिन चौधरीले गोल्छालाई पद हस्तान्तरण गरे ।
(टोकियो) - नेपाली खेलकुदका लागि ऐतिहासिक सहर हो टोकियो । जहाँ नेपालले सन् १९६४ मा ओलम्पिक यात्रा थालेको थियो । विश्व खेलकुदको कुम्भमा एक संस्करण (१९६८) छाडेर नेपालको सहभागिता निरन्तर छ । प्रदर्शन पनि उस्तै छ । टोकियो ५७ वर्षपछि फेरि ओलम्पिक आयोजना गर्दा नेपालको ओलम्पिक सुरुआत परम्परागत नै रह्यो । काठमाडौंबाट ५ हजार किमिभन्दा बढीको उडानमा टोकियो आइपुगेका दुई खेलाडी प्रारम्भिक चरणबाटै बाहिरिए ।
यी दुवै खेलाडीले आमन्त्रण कोटामा ओलम्पियन बन्ने अवसर पाएका हुन् । ३२ औं गृष्मकालीन ओलम्पिकमा विश्वव्यापी सहभागितामा मौका पाएका तीन खेलाडीको चुनौती बाँकी नै छ । पौडीमा अलेक्जेन्डर शाहले पुरुष १ सय मिटर फ्रिस्टाइलमा मंगलबार र गौरिका सिंहले महिला १ सय
मिटर फ्रिस्टाइलमा बुधबार प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । एथलेटिक्सकी सरस्वती चौधरीले महिला १ सय मिटरमा शुक्रबार दौडनेछन् ।
उनले भनिन्, ‘फुलटाइम खेल्छु नै भन्ने लागेको थियो तर सकिनँ । इरिनालाई पल्टाएर उठ्छु भन्ने लागेको थियो । एकपल्ट टेक्निक लगाएकी थिएँ । उनले ओसाइकोमी (म्याटमा थिच्ने) मा लगिन् र म त्यहाँबाट उठ्न सकिनँ ।’ सोनियाले थपिन्, ‘एक चान्स पाएको भए एक बाउट जित्ने धोको पूरा गर्छु भन्ने थियो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको अनुभव कम भएकाले पनि मलाई गाह्रो भयो । अब सिनियरका ठूला प्रतियोगिता खेल्दै अर्को ओलम्पिकमा छनोट भएर खेल्न चाहन्छु ।’
टोकियो (एपी)– जाभेद फोरोघीले थुप्रै रात कोरोनाका गम्भीर बिरामीको हेरचाहमा बिताए । श्वास फेर्न कठिन भएका बिरामीलाई बचाउन उनले सकेको सबैथोक अपनाए । उनी आफैं पनि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भए । निको भएपछि पनि काममा जान सधैं डर भइरह्यो । कतै फेरि संक्रमित हुने हो कि ?
तमाम कठिनाइ र भयावह स्थितिबीच यी ‘सार्प सुटर’ ले आफ्नो निशाना कहिल्यै धुमिल हुन दिएनन् । इरानका नर्स जाभेद अहिले ओलम्पिक च्याम्पियन भए । शनिबार टोकियोमा पुरुष १० मिटर एयर पेस्तोलमा स्वर्ण पदक जिते । योसँगै उनले इरानबाट ओलम्पिक पदक जित्ने सबैभन्दा पाका खेलाडीको कीर्तिमान बनाए ।
‘मलाई यसमै खुसी छ, मैले आफ्नो दुवै जिम्मेवारीलाई पूर्णतासाथ निभाएँ,’ दोभाषेको सहायतामा जाभेदले भने, ‘एउटा नर्सका रूपमा कोरोना महामारीविरुद्ध लड्नु निकै कठिन काम हो । एक सुटरका रूपमा मैले पछिल्लो दुई वर्ष यो सफलताका लागि धेरै नै मिहिनेत गरेको छु ।’
जाभेदले २ सय ४४.८ अंकसाथ ओलम्पिक कीर्तिमानसमेत बनाए । उनी रजत विजेता सर्बियाली दामिर मिकेचभन्दा ६.९ अंकले अगाडि रहे । सन् २००८ को ओलम्पिक स्वर्ण विजेता चीनका प्याङ वेई कांस्यमै सीमित भए ।
४१ वर्षे जाभेदले ओलम्पिक पदक जित्ने पाका खेलाडीको झन्डै सात दशक पुरानो स्वदेशी कीर्तिमान भंग गरे । सन् १९५६ मा मेलबर्न ओलम्पिकमा भारोत्तोलक मोहम्मुद मान्जोउले ३८ वर्षको उमेरमा कांस्य जितेका थिए ।
जाभेदको ओलम्पिक पोडियमको शीर्ष चरण यात्रा अविश्वसनीय र लगभग असम्भवजस्तै थियो । उनको जन्मपछि मुटुको धड्कनलाई सही अवस्थामा ल्याउन निकै कठिन भएको थियो । उमेरसँगै शरीर बढ्दै जाँदा उनी कुनै पनि खेलकुद गतिविधिमा सहभागी हुन असमर्थ थिए । मुटुको गति कम गरी नसा स्थिर बनाउनुपर्ने सुटिङ खेल त झन् उनले सोच्नै हुँदैनथ्यो । एक समय उनले आफ्नो मुटुको खराब स्थितिबाट मुक्ति पाए । त्यसपछि अस्पतालको अन्डरग्राउन्डमै पेस्तोल चलाउन सिक्न लागे । उनी आफ्नो रातिको ड्युटी पूरा गरी प्रशिक्षण सुरु गर्थे । यही मिहिनेतले उनलाई एक सानदार सुटर बनायो ।
महामारीको सुरुआती समयमै जाभेदलाई कोरोना संक्रमण भयो । त्यसपछि एक महिनासम्म त उनले अभ्यास गर्नै सकेनन् । कोरोनाबाट तंग्रिँदै जाँदा उनले एकदिन पनि प्रशिक्षण छाडेनन् । शारीरिक र मानसिक अभ्यासले उनी छिट्टै रिकोभर भए । महामारीको समयमा अनलाइन प्रतियोगिता आयोजना गरी आफूलाई फिट राख्ने प्रयास गर्थे ।
जाभेदले यो वर्षको सुरुआतमा विश्वकपका दुई स्पर्धामा उपाधि जिते र विश्व वरीयताको चौथो नम्बरमा रहेर टोकियो पुगे । उनी पाँचौं स्थानका लागि छनोट भएका थिए । तर, फाइनलमा पुगेपछि तत्कालै चौथो बनिहाले । फाइनलमा उनले सर्बियाका मिकेचलाई ४.२ अंकले पछि पारिसकेका थिए । अन्तिम दुई सट प्रहार उनको अझै उत्कृष्ट भयो । स्वर्ण जितेसँगै उने रुमाल भुइँमा ओछ्याएर घुँडा टेक्दै अल्लाहलाई धन्यवाद दिँदै जितको खुसी साटे ।